ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာမီဒီယာပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ဆိုင်ရာအရာ ၀ တ္ထုများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ခံယူချက် (၂၀၀၇) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn On
တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိင်္တုအဖြစ်အမျိုးသမီးသူတို့၏အပ်ချုပ် (2007) မှဆယ်ကျော်သက် '' Exposure
comments: ညစ်ညမ်း vi မှ Exposureလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးကိုမြင်လျှင်မှသိသိသာသာဆက်စပ်ခဲ့ပေ။ မြန်နှုန်းမြင့် porn အတိတ်၏ညစ်ညမ်းထံမှကွဲပြားခြားနားကြောင်းကိုနောက်ထပ်အရိပ်အယောင်။
လိင်အခန်းကဏ္ဍ - သုတေသနဂျာနယ်© Springer Science + စီးပွားရေးမီဒီယာ၊
အွန်လိုင်း Published: ၂၀၀၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈
ယောခေပေတရု1,2နှင့် Patti အမ် Valkenburg1
(1) အမ်စတာဒမ်, အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်, အဆိုပါနယ်သာလန်
(2) အမ်စတာဒမ်ဆက်သွယ်ရေးသုတေသနကျောင်း၊ အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်၊ ကလိုဗင်းနီးစ်ဘာဝါ ၄၈၊ ၁၀၁၂ CX အမ်စတာဒမ်၊ နယ်သာလန်
Patti အမ် Valkenburg
ဒီလေ့လာမှုကတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုအမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းအားကောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ M ကသတ္တုရိုင်းအထူးသကျနော်တို့ဆိုလိုသည်မှာအမြင်အာရုံနဲ့ audio-အမြင်အာရုံ (လိင်တ္ထုများနှင့်မတူညီရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့ (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင် Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ, Semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ, ဒါမှမဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ) ရှိမရှိနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြင့်လေ့လာခဲ့ ) ပိုကောင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအဖြစ်သို့မဟုတ် hierarchical အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
နောက်ထပ်ကျနော်တို့ကဒီအသင်းအဖွဲ့ကျားမအပေါ်ဆက်ပြောပါတယ်ခဲ့ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ 745 ၏ On-line ကိုစစ်တမ်းကနေဒေတာတွေကိုအပျေါအခွခေံ 13 မှ 18 အသက်ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်, လိင်အရာဝတ္ထုပြောင်းရွှေ့အဖြစ်, လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်အတူစတင်ခြင်းအမျိုးသမီးများ၏အယူအဆတွေနှင့်အတူဆက်ဆံရေး၏စာရင်းအင်းအရေးပါမှု: ကျွန်တော်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အမျိုးသမီး၏အယူအဆတွေမှထိတွေ့မှုများအကြားဆက်ဆံရေးလိင်အရာဝတ္ထုတစ်ခု hierarchical ပုံစံနောက်တော်သို့လိုက်အဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာထံမှရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အမြင်အာရုံထဲကနေအသံ-အမြင်အာရုံကို formats ရန်။ On-line ကိုရုပ်ရှင်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုသိသိသာသာအမျိုးသမီးများသည်နောက်ဆုံးဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်အတွက်လိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာခဲ့သည်, သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အခြားပုံစံများကိုထိတွေ့ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။ လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတွေ့မှုနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အယူအဆတွေအကြားဆက်ဆံရေးမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအဘို့ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
ပေတရုနှင့် Valkenburg (2007) တစ်ဦးဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်များ၏လေ့လာမှု (N ကို = 745) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏သဘောထားအမြင်များအကြားဆက်ဆံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးသော။ သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှတိုးမြှင့်ထိတွေ့မြီးကောင်ပေါက်, မခွဲခြားဘဲကျား၏, လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးရှုမြင်မယ်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Keywords-ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ရုပ်မြင်သံကြား မဂ္ဂဇင်းများ အင်တာနက်ကို မြီးကောင်ပေါက်
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်သုံးခုမှာတော့သက်သေအထောက်အထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့ကျား, မကျပုံစံနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်အမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းစုဆောင်းထားပြီး (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်, Escobar-Chaves et al ကြည့်ပါ။ , 2005 ; ရပ်ကွက်, 2003 ) ။ အစောပိုင်းကသုတေသီများပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ခုတည်းအမျိုးအစား (ဥပမာဆပ်ပြာ Opera ကဟာသ, ပြဇာတ်, ဒါမှမဟုတ်သီချင်းဗီဒီယိုများ) သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းအလတ်စား (ဥပမာ, ရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ်မဂ္ဂဇင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာ; ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်, Escobar-Chaves et al တွေ့မြင်။ 2005 ; ရပ်ကွက်, 2003 ) ။ မြီးကောင်ပေါက်များ၏မီဒီယာအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုလုံလောက်စွာရယူနိုင်ရန်အတွက်သုတေသီများသည်မကြာသေးမီကမျိုးစုံမျိုးကွဲများ (Aubrey, Harrison, Kramer, & Yellin) တို့ပါဝင်သည်။ 2003 ; ရပ်ကွက်, 2002 ; ရပ်ကွက်နှင့်ဖရီဒ်မန်း 2006 ) နှင့်မျိုးစုံမီဒီယာ (ဥပမာဘရောင်း et al ။ , 2006 ; L'Engle, Brown, & Kenneavy 2006 ; ပါဒန်း၊ L'Engle နှင့်ဘရောင်း၊ 2005 ).
လယ်ပြင်၌ဤအသီးအနှံများဖှံ့ဖွိုးတိုးနေသော်လည်းလက်ရှိသုတေသနနှစ်ခုကွာဟချက်ဒီကဗျာဖြစ်ကြသည်။ ပထမဦးစွာသုတေသီများခဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက် '' ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအပိုဆောင်း Correlate အဖြစ်အင်တာနက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်း '' မြီးကောင်ပေါက်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ အင်တာနက်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာ, ပါးစပ်အင်္ဂါဇာတ်နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံ) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေး (ဥပမာ sado-masochistic လိင်, fetishes) ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုမသာမြီးကောင်ပေါက် (Cooper ကမှအလွယ်တကူများမှာ 1998 ), သူတို့ကလည်း (Lo & ဝေ, 2005 ; ပတေရု & Valkenburg, 2006 ) ။ လိင်အရာဝတ္ထုလိင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့အကြောင်းအရာ၏အမြင်အာရုံသို့မဟုတ်အသံ-အမြင်အာရုံပုံစံအပေါ်မှီခိုနေကြအဖြစ်ဒုတိယ, ကနေဆဲပွင့်လင်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရှိမရှိနှင့်အမျိုးသမီး၏မြီးကောင်ပေါက် '' အယူအဆတွေအဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာရန်ဖြစ်ပါသည်။ Little ကဥပမာအားဖြင့်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာသူတို့ရဲ့ထိတွေ့မှုထက်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်နှင့်ဆက်စပ်သည်, ၏မြီးကောင်ပေါက် '' စားသုံးမှုရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ အလားတူပဲကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များအကြားတစ်ဦးအလားအလာအသင်းအဖွဲ့အမြင်အာရုံကို formats (မဂ္ဂဇင်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်အပေါ်ဥပမာဓာတ်ပုံများကို) နှင့်အသံ-အမြင်အာရုံကို formats (ရုပ်သံပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်မှာဥပမာ, ရုပ်ရှင်) အကြားမတူကွဲပြားခြားနားခြင်းရှိမရှိမသိရပါဘူး။
အဲဒီနှစျခုကွာဟချက်၏အကျိုးဆက်, ဘရောင်း et al အဖြစ်။ ( 2006 ) (စ။ 1026) "ဆယ်ကျော်သက်လိင်အပေါ်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှုအပေါ် dditional သုတေသနကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှုတို့ပါဝင်သည်သင့်ပါတယ် [တစ်]" ကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ဘရောင်း et al ။ ထို့အပြင် (စ။ 1026) "[s ကို] ubsequent ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် [လိင်မီဒီယာအစားအစာကိုအတိုင်းအရှည်၏] က component တစ်ခုကမီဒီယာများ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏ဆွေမျိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆုံးဖြတ်ရန်ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်" အဲဒီမေတ္တာရပ်ခံပါပြီ။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့နှစ်ခုတောင်းဆိုမှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဘရောင်း et al အားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအစားအစာကိုအတိုင်းအရှည်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ နှင့်အခြားသုတေသီများ (ဘရောင်းကစိတ်ကူးများ 2000 ; ဘရောင်း et al ။ , 2006 ; Greenfield, 2004 ; သည် L'Engle et al ။ , 2006 ; Pardun et al ။ , 2005 ; Strasburger & Donnerstein, 1999 ), ကျနော်တို့သုတေသန၏ဤလိုင်းတိုးချဲ့ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်၏အယူအဆတင်ပြသည်။ ဘရောင်း et al ။ ရဲ့ (တုန့်ပြန် 2006 ) တောင်းဆိုမှုများကိုကျနော်တို့အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး, အခြားမီဒီယာများတွင်မတူညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဟာသူတို့ရဲ့ထိတွေ့မှုအပြင်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ နောက်ထပ်ကျနော်တို့ကိုလေ့လာ ဘယ်လို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအကြောင်းအရာများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ပစ္စည်းများ၏အမြင်အာရုံနဲ့ audio-အမြင်အာရုံ format နှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' ကျားပေါ် မူတည်. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ယခုလေ့လာမှုသည်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ဆယ်ကျော်သက်များ၏ယုံကြည်ချက်အပေါ်အာရုံစိုက်ပြီးအမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးမီဒီယာတွင်ရှိသောလိင်အကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုယူဆသည်။ အမျိုးသမီးများအားလိင်ဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်သီအိုရီအရရောလူမှုရေးအရပါသက်ဆိုင်သည့်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏လူမှုရေးတည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာအယူအဆကိုပိုမိုဖွံ့ဖြိုးစေပြီးကျားမခွဲခြားဆက်ဆံမှု၏ဗဟိုပုံစံကိုညွှန်ပြသည် (Fredrickson & Roberts, 1997 ) ။ ထို့ပြင်မကြာသေးမီသုတေသနအမျိုးသမီးများကိုလိင်တ္ထု (ရပ်ကွက်, ဖြစ်ကြောင်းကိုလိင်အမျိုးသမီးတွေ objectifies ကြောင်းမီဒီယာလွှမ်းခြုံထိတွေ့ခြင်းအကြား link တစ်ခုထူထောင်နှင့်မြီးကောင်ပေါက် '' ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ် 2002 ; ရပ်ကွက်နှင့်ဖရီဒ်မန်း 2006 ) ။ အဆိုပါဖျောပွညှနျကွားခအတွက်သုတေသန၏ဤလိုင်းလိုက်ရှာကျားမခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆီသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့်သဘောထားတွေကိုထိတွေ့ကြားရှိစပ်လျဉ်းနားလည်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်။
မြီးကောင်ပေါက်မယ့်မီဒီယာ-ပြည့်နှက်ကမ်ဘာပျေါတှငျနထေိုငျသောအကြီးထွားလာသဘောတူညီမှု (Qrius ရှိပါသည် 2005 ; Roberts, Foehr, & Rideout, 2005 ) နှင့်အမျိုးမျိုးသောမီဒီယာ (Kunkel, Eyal, Finnerty, Biely, & Donnerstein,) တွင်လိင်အကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ဖွယ်ရှိသည် 2005 ; Pardun et al ။ , 2005 ) ။ ရလဒ်အဖြစ်သုတေသီများပျောက်မှသာတစ်ခုတည်းအလတ်စားမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုတိုင်းကနေလှည့်ပါပြီ။ ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးကဤမီဒီယာမှာတွေ့ရတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောမီဒီယာမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့အယ်လ်။ ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအစားအစာကိုအတိုင်းအရှည်, (ဘရောင်း et al ဘရောင်း et အားဖြင့်ခံပြီးဖြစ်ပါတယ်။ , 2006 ; သည် L'Engle et al ။ , 2006 ; Pardun et al ။ , 2005 ) ။ ဤအတိုင်းအတာကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လိင်မှုဆိုင်ရာဂေဟဗေဒပုံစံများသို့တိုးချဲ့ရန်ကန ဦး ကြိုးပမ်းမှုတွင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏သဘောထားနှင့်အပြုအမူကိုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ရှုမြင်သော (Lerner & Castellino, 2002 ), ကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်၏အယူအဆရှေ့ဆက်ထားတော်မူ၏။ တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်၏အယူအဆသုံးခုယူဆချက်အပေါ်အခြေခံသည်။ ပထမဦးစွာမီဒီယာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတစ်ခုမကြုံစဖူးငွေပမာဏလည်းမရှိ။ ဒုတိယအချက်, ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနေရာအနှံ့နှင့်တစ်ခုတည်းအလတ်စားဖို့ကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ တတိယအချက်အမျိုးမျိုးသောမီဒီယာ ပို. ပို. ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများရန်လွယ်ကူ access ကိုဆက်ကပ်။ ဒါဟာအင်တာနက်ကိုအထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်သည်။
ပထမဦးဆုံးယူဆချက်နှင့် ပတ်သက်. သက်သေအထောက်အထားများမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများမကြာသေးမီကဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းတိုးမြှင့်ထားပြီးစုဆောင်းထားပြီး (ကပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, ရပ်ကွက်ကိုမြင်ရ, 2003 ) ။ ဤသည်ရုပ်မြင်သံကြား (ဥပမာ Kunkel et al များအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်သည်။ , 2005 ), ဒါပေမယ့်လည်းယေဘုယျအကျိုးစီးပွားနှင့်မိန်းကလေးများ '' မဂ္ဂဇင်း (လက်သမားသက်ဆိုင်, 1998 ; Scott, 1986 ) ။ မကြာသေးမီကအမေရိကန်လေ့လာမှုကိုအမေရိကန်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်ကွင်းများ၏နံပါတ်နီးပါး 1998 နှင့် 2005 (Kunkel et al အကြားနှစ်ဆတော်မူကြောင်းကိုပြသခဲ့တယ်။ , 2005 ) ။ အခြားသူများကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းစာမကျြနှာများ၏အရေအတွက် 1,800 နှင့် 1998 (ပေါလုသည်အကြား 2004% အထိတိုးလာသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့ကြ 2005 ).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထူးဆန်းသောငွေပမာဏအမျိုးမျိုးသောမီဒီယာ (ဒုတိယယူဆချက်) တွင်ရရှိနိုင်သောသဘောနေရာအနှံ့ဖြစ်သနည်း စာပေဒ reviews မသက်ဆိုင်မြီးကောင်ပေါက်မီဒီယာပုံနှိပ်သို့မဟုတ်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်မှလှည့်ဖြစ်စေ, သူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (Escobar-Chaves et al ကြုံတွေ့ရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်, ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 2005 ; ရပ်ကွက်, 2003 ) ။ ဥပမာအားဖြင့်, အောက်တိုဘာလ 2004 နှင့်ဧပြီလ 2005 အကြား, အ 70 ရုပ်မြင်သံကြား၏ 20% အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်အများဆုံးမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပါဝင်သည် watch, နှင့် 45% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ featured ကြောင်းပြသထားတယ်။ ရုပ်ရှင်၏ကိုးဆယ်-နှစ်ရာခိုင်နှုန်း, ထိုဇာတ်လမ်းတွဲနှင့်ဒရာမာစီးရီး 87% နှင့်လူမှုဘဝသရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်း၏ 85% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (Kunkel et al ပါရှိသောလေ့လာခဲ့သည်။ , 2005 ) ။ အတော်များများကမဂ္ဂဇင်းများ, ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်ဆွေးနွေးရန်, ထပ်. အတင်းအကြပ် စုပေါင်း. သို့မဟုတ်ဝတ်လစ်စလစ်မော်ဒယ်များနှင့်အတူစာဖတ်သူများထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နှင့်ရပ်ကွက်ကြည့်မြင်ပြန်လည်သုံးသပ် (သူတို့ရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုတိုးတက်စေရန်မည်သို့စာဖတ်သူများအကြံပေး 2003 ) ။ ထိုအရူးနှမ်းစည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူ Google မှတစ်ဦးရိုးရှင်းသောရှာဖွေရေး "အခမဲ့လိင်" နိုဝင်ဘာလ 2006 အတွက် 2,460,000 ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များသို့တဦးတည်း mouse ကိုကလစ်အတူအသုံးပြုသူသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်တာမျိုး။
အင်တာနက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတို့၏စီးပွါးများနှင့်နေရာအနှံ့၏ဖျောပွဥပမာပြီးသားမြီးကောင်ပေါက်လက်ရှိ Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း sexually အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းရယူနိုငျသောတတိယယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။ အင်တာနက်ရဲ့ချဲ့ထွင်မှုနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်မှမရရှိနိုင်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြစ်လာသည်။ ပို. အရေးကြီးသည်မှာအင်တာနက်ကိုမြီးကောင်ပေါက်ပေါ် (အမည်ဝှက်နှင့်တာဝန်ခံမပါဘဲ Cooper ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းတစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏကိုရယူနိုငျသညျ, 1998 ) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အင်တာနက်သူတို့ရဲ့ရွယ်တူ (Greenfield နှင့်အတူလိင်ကအကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမျှဝေခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်၏အစိတ်အပိုင်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုဖန်တီးရန်မြီးကောင်ပေါက်နိုင်ပါတယ် 2004 ).
တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်၏အယူအဆများ၏ယူဆချက်နှင့်အညီ, ထို့နောက်မရရှိနိုင်ပါဒေတာမြီးကောင်ပေါက်သည်လက်ရှိတွင်တစ်ခုတည်းအလတ်စားရန်ကန့်သတ်ထားနေရာအနှံ့နှင့်မဖြစ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာတစ်ခုမကြုံစဖူးငွေပမာဏနှင့်အတူရင်ဆိုင်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါအင်တာနက်, အထူးသဖြင့်, Cooper က (ရရှိနိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၏တိကျပြတ်သားတိုးချဲ့နေဖြင့်မြီးကောင်ပေါက် '' မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကို sexualized ထားပါတယ် 1998 ; Lo & Wei, 2005 ; ပေါလုက, 2005 ).
ကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာကိုဖြတ်ပြီးမတူညီရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့ဖမ်းဆီးဖို့ကျနော်တို့လိင် Semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ, လိင် Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်မဂ္ဂဇင်းများအတွက်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာ, ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာ, နှင့်အင်တာနက်ပေါ် ။ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်မဂ္ဂဇင်းများမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (ရပ်ကွက်, အဖြစ်အများဆုံးသုတေသနအာရုံစိုက်မှုခံရကြပြီ 2003 ), ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ကိုလက်ရှိအလားအလာသက်ရောက်မှု (Greenfield အဖြစ်ဆွေးနွေး 2004 ; Lo & Wei, 2005 ; Thornburgh & Lin၊ 2002 ) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏သုံးပုံစံများ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အကြီးအကျယ်အကြောင်းအရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်အသုံးဝင်သောသက်သေပြခဲ့ကြကြောင်းအဓိပ္ပာယ် (ဥပမာ Kunkel et al အောက်ပါအတိုင်း။ , 2005 ) ။ လိင်က မဟုတ်တဲ့-explicit အကြောင်းအရာသွယ်ဝိုက်နည်းလမ်းများဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသရုပ်ဖော်သည်။ ဒါဟာဗလာဆံ့နိုငျသျောလညျးကပုံဖော်တင်ဆက်များ၏အာရုံစူးစိုက်မရဖြစ်၏ ဝတ်လစ်စလစ်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများအနီးကပ်ပေါ်လာပါဘူး။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းအဓိပ်ပာသို့မဟုတ်ပုံဖော်ပေမယ့်ပုံဖော်တင်ဆက်ပုံမှန်အားသတိပညာဖြစ်နေဆဲနိုင်ပါသည်။ လိင်က Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာအများအားဖြင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ဆပ်ပြာများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ပုံဖော်တင်ဆက််ဗလာကပါဝင်ပတ်သက်ပါကအလယ်ဗဟိုအဆင့်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်ရင်းနှီးသောထိထိမိမိမပြထားဘူး။ လိင်အတွက် တစ်ပိုင်း-explicit အကြောင်းအရာ, အဖော်အချွတ်အာရုံစိုက်မှု၏ဗဟိုသည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ပုံဖော်တင်ဆက်ရင်းနှီးသောထိထိမိမိကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုအကြံပြုနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြသကြသည်မဟုတ်။ လိင်က Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာကဲ့သို့သောရုပ်သံစီးရီးအတွက်ဥပမာ, ဖြစ်ပေါ် လိင်တရားရုံး or Sexcetera။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း unconcealed နည်းလမ်းလိင်အင်္ဂါများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပြသထားတယ်။ , ခံတွင်းအင်္ဂါဇာတ်နှင့်စအိုထိုးဖောက်မှုပုံမှန်အားအနီးကပ်မှာပြထားတဲ့, ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်။ လိင်ကအကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာပုံမှန်အား "အရွယ်ရောက်ပြီးသူ", "အမာခံ" သို့မဟုတ် "ကို XXX" ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ featured ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ Semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ, ဒါမှမဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရှိမရှိ၏, အကြောင်းအရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတသမတ်တည်း, ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများလိင်ရပ်ကွက်ကြည့်မြင်ပြန်လည်သုံးသပ် ( ပို. မကြာခဏယောက်ျားထက်အမျိုးသမီးတွေ objectifies ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ 2003 ) ။ Fredrickson နှင့်ရောဘတ် (အဆိုအရ 1997 ), အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification သူတို့ရဲ့အပြင်ဘက်အသွင်အပြင်နှင့်၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ် (အစိတ်အပိုင်းများ) ကိုအာရုံစူးစိုက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူခံဝင်မှလျှော့ချအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုများကိုသူတို့၏ဆွဲဆောင်မှု၏အဓိကစံနှုန်းနှင့်အမျိုးသားများ၏လိင်ဆန္ဒများကိုနှစ်သက်စေရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကစားစရာများအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏သရုပ်ဖော်ပုံများအဖြစ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလည်းပါ ၀ င်သည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်နှင့်တေးဂီတဗီဒီယိုများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိသောအကြောင်းအရာများတွင်အမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအမျိုးသားများခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း (ဥပမာ - Grauerholz & King၊ 1997 ; Seidman, 1992 ) ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီပရိုဂရမ်းမင်းကိုအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုအရ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောဖြစ်စဉ်များ၏ ၈၄% တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်စော်ကားမှုအားလုံး၏ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်အမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အဓိကထားသောနှုတ်ဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ချက်စကားများဖြစ်သည် (Grauerholz & King, 1997 ) ။ 182 သီချင်းဗီဒီယိုများတစ်ခုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတို့သညျလူ% 37 ဆန့်ကျင်အဖြစ်အမျိုးသမီးများ 4%, ထုတ်ဖော်အဝတ်အစား (Seidman, ဝတ်ဆင်ကြောင်းပြသ 1992 ).
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအမျိုးသားမဂ္ဂဇင်းများတွင်ပညာရှင်များသည်အမျိုးသမီးများအား၎င်းတို့၏အသွင်အပြင်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရရှိနိုင်သည့်ပုံရိပ်အဖြစ်ဖော်ပြရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (Krassas, Blauwkamp, ​​& Wesselink, 2001 ) ။ လိင်က Semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရုပ်ရှင်များတွင်အမျိုးသမီးဗလာဥပမာ4တစ်အချိုးအတွက်ယောက်ျားအဝတ်ဗလာမယ်လို့တရုတ်လူမှုသိပ္ပံအကယ်ဒမီ: 1 (Greenberg et al ။ 1993 ) ။ နောက်ဆုံး၌ဗွီဒီယိုများ၊ ဒီဗီဒီ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများသည်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကစားစရာများနှင့်လက်အောက်ငယ်သားများအနေဖြင့်အဓိကထားဆက်ဆံသည်။ သူတို့၏အလောင်းများနှင့်လိင်အင်္ဂါများသည်အဓိကအာရုံစိုက်ရာနေရာဖြစ်သည် (ဥပမာ Brosius, Weaver, & Staab, 1993 ; Cowan, Lee က, Levy, & Snyder, 1988 ; Ertel, 1990 ) ။ Cowan et al ။ ( 1988 ) ဥပမာ, လိင်အင်္ဂါဟု Full-Screen ကိုထိတွေ့မှု objectifying ၏ 69% အမျိုးသမီးများ၏ရိုက်ချက်များ ရှိ. , 31% ယောက်ျား၏ရိုက်ချက်များဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
ဤအအကြောင်းအရာများ၏တသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်နေသော်လည်းလေ့လာဆန်းစစ်သာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများလိင်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအမျိုးသမီးများနှင့်အယူအဆတွေ objectifies ကြောင်းမီဒီယာလွှမ်းခြုံထိတွေ့ခြင်းအကြားအလားအလာ link ကိုသက်ဆိုင်ရာပါပြီ။ ရပ်ကွက် ( 2002 ) မကြာခဏရုပ်မြင်သံကြားစောင့်ကြည့်သူကိုငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ဖို့လျော့နည်းမကြာခဏရုပ်မြင်သံကြားစောင့်ကြည့်သူကိုနုပျိုလူကြီးများထက် ပို. ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းဆက်စပ်အထောက်အထားကိုပေးအပ်သည်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာတော့ရပ်ကွက်နှင့် Friedman ( 2006 ) အမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေတိုးလာ objectified တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကလစ်မှထိတွေ့မှုကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်။ ရပ်ကွက်အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့သေးသာအစမ်းသပ်အုပ်စုတွင်အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများအဘို့, ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များမှဆန့်ကျင်အဖြစ်, ဒါပေမယ့်မစမ်းသပ်အုပ်စုတွင်အထီးဘာသာရပ်များသည်။ သုတေသနနဲ့အခြားထိုကဲ့သို့သောပုံနှိပ်မီဒီယာသို့မဟုတ်အင်တာနက်ကနေအဖြစ်မီဒီယာ, နှင့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏အမြင်များအကြားအသင်းအဖွဲ့အပေါ်ပျောက်နေသည်။ သို့သော်အကြောင်းအရာတွေ့ရှိချက်လိင် Semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာအတွက်အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification အပေါ်လေ့လာဆန်းစစ်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေကိုတိုးမြှင့်စေမည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတွေ့မှုနှင့်ယုံကြည်မှုများအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ထင်ရသော်လည်းဒီဆက်နွယ်မှု၏သဘောသဘာဝနေဆဲဝိုးတဝါးဖြစ်နေဆဲပင်။ လိင်အရာဝတ္ထုထိုကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောရုပ်မြင်သံကြားရှိုးသို့မဟုတ်အပေါ်ရုပ်ရှင်အဖြစ်မဂ္ဂဇင်းအတွက်ဓာတ်ပုံများကို, သို့မဟုတ်အသံ-အမြင်အာရုံသကဲ့သို့, ဆိုလိုသည်မှာအမြင် (ထိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်၎င်း၏ပုံစံပေါ် မူတည်. ကွာခြားအဖြစ်ကိုပိုပြီးတိတိကျကျ, ကအဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအမျိုးသမီးများ၏အယူအဆတွေမှရှင်းလင်း အင်တာနက်)။ မတူညီရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုဖြတ်ပြီးထိတွေ့မှုအမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်အတူတစ်ဦး (စုပေါင်း) အသင်းအဖွဲ့အတွက်တက် add ပါသလား? ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခု Construction တစ် hierarchical စပ်လျဉ်းပိုမိုဖွယ်ရှိသည်အမြင်အာရုံ-အသံနှင့်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုကပိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အမြင်အာရုံနှင့်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုထက်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနှင့်အတူဆက်စပ်ရသော?
ငါတို့သည်လည်းအမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းမတူညီရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်ယုံကြည်ချက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအတွက်ကျားမကွဲပြားမှုအကြောင်းကိုနည်းနည်းသိကြ၏။ အများအပြားကလေ့လာမှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများမှထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များအကြားစပ်လျဉ်းရပ်ကွက်ကြည့်မြင်ပြန်လည်သုံးသပ် (မြီးကောင်ပေါက် '' ကျားမအပေါ်ခြွင်းချက်ဖြစ်မည်အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြ 2003 ) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အမျိုးသမီးများကိုလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတွေ့မှုနှင့်ယုံကြည်မှုများအကြားတိကျသောအသင်းအဖွဲ့ယောက်ျားလေးများသို့မဟုတ်မိန်းကလေးအားကောင်းဖြစ်နိုင်သည်ရှိမရှိဆိုရရန်ခက်ခဲသည်။
hierarchical vs. တိုးပွားလာသော
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, နေရာအနှံ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာတိုးမြှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၎င်း၏လွယ်ကူသောအသုံးပြုနိုင်စွမ်းအတူမြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်၏အယူအဆ၏စိတ်နှလုံးမှာအိပ်။ ဒါကစိတ်ကူးတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုအမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်အကြောင်းဘယ်လောက်အနည်းဆုံးနှစ်ခုပုံစံများအကြံပြုထားသည်။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးပုံစံကိုပဌနာ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာ။ တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့မတူညီရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုအမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့အတွက်တက်ဖြည့်စွက်ဆိုလို။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်၎င်း၏အမြင်သို့မဟုတ်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင် format နဲ့မြီးကောင်ပေါက်ထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့နေကြဆိုတဲ့အချက်ကိုထက်လျော့နည်းအရေးကြီးလှသည်။ ရလဒ်အဖြစ်မသက်ဆိုင်အဆိုပါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်အကြောင်းအရာပုံစံ၏, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပိုမိုထိတွေ့မှုအမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းအားကောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပါလိမ့်မည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့အမြိုးမြိုးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြင့်ထိတွေ့ခြင်းသိသိသာသာလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထိတွေ့လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနှင့်ဆက်နွယ်သောအတူခွန်အားကိုအနည်းဆုံးပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာမဟုတျဘဲမူလတန်းအကျိုးစီးပွား, အတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပုံစံများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုသတ်မှတ်ပေမယ့်ခဲ့ပေမည်။
တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များအကြားအသင်းအဖွဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပုံစံပိုင်းတွင်မီဒီယာမှာထောက်ပြသောဆင်ခြင်ခြင်းအခြေခံ ယေဘုယျအားဖြင့် တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးအေးဂျင့် (ဥပမာသည် L'Engle et al အဖြစ်။ , 2006 ; Strasburger & Donnerstein, 1999 ) ။ တစ်ဦးအတိုင်းအတာများအဆင့်မှာတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပုံစံလုံးလုံးလြားလြားတဦးတည်းကိုအတိုင်းအရှည် (ဥပမာဘရောင်း et al အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့၎င်း၏ပေါင်းစပ်နှင့်တကွ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအစားအစာကိုအတိုင်းအရှည်အတွက်ဥပမာ, ယူဆနေသည်။ , 2006 ) ။ ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောအဆင့်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများအကြားဆက်စပ်မှုပုံစံသည်ဥပမာအားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးအန္တရာယ်အချက်များ (ဥပမာ Rich & Bar-On) အနေဖြင့်မီဒီယာကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်တောင်းဆိုသည် 2001 ).
လိင်မီဒီယာအစားအစာကိုအတိုင်းအရှည်ပေါ်တွင် အခြေခံ. ပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပုံစံ (ဘရောင်း et al များအတွက်ကနဦးထောက်ပံ့မှုကိုပေး။ , 2006 ; သည် L'Engle et al ။ , 2006 ) ။ သို့သော်လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုမပါဝင်ခဲ့သလဲ, သုတေသီဘရောင်း et al ကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအစားအစာကိုအတိုင်းအရှည်၏အစိတ်အပိုင်းများ၏ဆွေမျိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ခဲ့ပါဘူး။ ( 2006 ) မိမိတို့ကိုယ်ကိုထောက်ပြသည်။ ဘရောင်းနှင့်အယ်လ်တစ်ခု extension ကို။ ရဲ့သုံးသပ်ချက်အရှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျိုးမျိုးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုဖြတ်ပြီးမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုအမျိုးသမီးတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်အတူ၎င်း၏အလားအလာအသင်းအဖွဲ့အတွက်သီးခြားစီဆန်းစစ်စေလိုအပ်သည်။ တစ်ဦးမျိုးစုံဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများတွင်တစ်ဦးတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပုံစံလိင်ဆက်ဆံတ္ထုများနှင့် Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမှထိတွေ့မှု, Semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအမြင်အာရုံနှင့်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ပုံစံများဖြင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေအကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးများကညွှန်ပြရတော့မှာပါ။
ကျနော်တို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုအမျိုးသမီးတွေလိင်အဆိုပါ objects ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်အကြောင်းဘယ်လောက်၏ဒုတိယပုံစံကိုပဌနာ hierarchical ပုံစံ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများသည်ရိုးရာမီဒီယာရှိအခြားအကြောင်းအရာများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးအေးဂျင့်ဟုယူဆသောဆင်ခြင်တုံတရားတွင်အဆင့်ဆင့်ပုံစံကိုလုံးလုံးလျားလျားယူဆနိုင်သည်။ (Donnerstein & Smith, 2001 ; ပေါလုက, 2005 ; Thornburgh & Lin၊ 2002 ) ။ တစ်ဦးထက်ပိုလက်တွေ့ကျတဲ့အဆင့်တွင်ထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များအကြားစပ်လျဉ်းအတွက် hierarchical ပုံစံ, မိသားစုများနှင့်ကျောင်း (Greenfield အတွက်အထူးအင်တာနက်လိင်ပညာရေးတောင်းဆိုအဖြစ်တောင်းဆိုမှုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားအခြေခံ 2004 ) သို့မဟုတ်အင်တာနက် (Freeman က-Longo မှမိမိတို့သားသမီးများအားကာကွယ်ရန်မည်သို့မိဘများအကြံပေး, 2000 ) ။ အဆိုပါစုပေါင်းပုံစံမတူဘဲ, ဖြစ်လျှင်, hierarchical ပုံစံရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနှင့်ပုံစံများအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုအမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့အတွက်တက်ဖြည့်စွက်ကြောင်းပါဝငျမထားဘူး။ အဲဒီအစား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများက၎င်း၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်၎င်း၏အမြင်သို့မဟုတ်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ပုံစံပေါ်မူတည်ပြီးလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေမှ hierarchical ပြောပြတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၏တိကျပြတ်သား၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦး hierarchical ပုံစံသာလိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာနောက်ဆုံးမှာလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ အကြောင်းအရာလိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာ၏လေ့လာဆန်းစစ် (ဥပမာ, မကြာခဏ Full-screen ကိုမအင်္ဂါရိုက်ချက်များ, မှတစ်ဆင့် Cowan et al အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification အကြံပြုခဲ့ကြ။ , 1988 ), ကိုခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အထီးသုတ်ရည်လွှတ်, မျက်နှာ, သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် (Brosius et al ၏နှုတ်တော်ထွက်တွင်။ , 1993 ), နှင့်တစ်ဦး passive အခန်းကဏ္ဍ (Ertel အတွက်အမျိုးသမီးများပုံဖော်တင်ဆက် 1990 ) ။ အနည်းဆုံးအား၎င်း၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပြင်းထန်မှုတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာပါ ၀ င်သောအမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများအားလိင်ဆိုင်ရာမရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်ပစ္စည်းများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ခြင်းထက် ပို၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့အပွငျအလားအလာစိတ်လှုပ်ရှားစရာလေ့နှင့်လျော့နည်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမှပင် desensitization (Zillmann & Bryant, 1986 ) လိင်ကအကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်ဖို့ရာအတွက်သာထိတွေ့တဲ့ hierarchical ပုံစံ, ဖြစ်ပေါ်စေမည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အမြင်အာရုံသို့မဟုတ်အသံ-အမြင်အာရုံ format ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦး hierarchical ပုံစံနောက်ဆုံးမှာသာအသံ-အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအမျိုးသမီးများကိုလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းအယူအဆတွေနဲ့အတူနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ အကြောင်းအရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ပစ္စည်းအတွက်, ယောက်ျားတစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးထောင်ချီ, ကြမ်းတမ်းလမ်း (ဥပမာ Cowan et al အတွက်မိန်းမတို့အားပွောဆိုကွောငျးတငျပွခဲ့ကွ။ , 1988 , Ertel, 1990 ) ။ အချိန်နှင့်တပြေးညီအစီအစဉ်တွင်အမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကိုအဓိကထားသောလိင်ဆိုင်ရာမှတ်ချက်များသည်မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည် (Grauerholz & King, 1997 ) ။ ရလဒ်အဖြစ်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ပစ္စည်း၌၎င်း, ပြုလုပ်နှင့်တကွ, အပိုဆောင်းအာရုံရုပ်သံလိုင်းလိင် objectifying နှုတ်သို့မဟုတ် acoustic မက်ဆေ့ခ်ျများ (ဥပမာ, မြည်) ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေအကြားထက်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်အယူအဆတွေအကြားပိုမိုအားကောင်းအသင်းအဖွဲ့ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများသီးသန့်အမြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်အမြင်များ။
အမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတွေ့မှုနှင့်ယုံကြည်မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့အတွက် hierarchical ပုံစံတစ်ခုလုံလောက်သောစမ်းသပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါငျးတို့သသုံးမျိုးမှထိတွေ့မှုနှစ်ခုလုံးအမြင်အာရုံနှင့်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ကို formats များအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရသည်ဟုလိုအပ်သည်။ တစ်ဦး hierarchical အသင်းအဖွဲ့ပုံစံ၏အမှု၌, တစ်ဦး hierarchical မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပိုင်းတွင်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများ Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာနှင့်အယူအဆတွေ sexually မှထိတွေ့မှုများအကြားသိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့များထုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ပေမယ့်မရှိတော့လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာ၏စားသုံးမှုများအတွက်, လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုအတှကျအသိသာအသင်းအဖွဲ့များရှိပါလိမ့်မယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်းစဉ်းစားသည်တစ်ချိန်ကသို့သော်, ထိတွေ့မှုကသာဒီ type အမျိုးသမီးများကိုလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်အတူတစ်ဦးသိသိသာသာဆက်ဆံရေးဟာအလို ရှိ. , လိင်က Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုနှင့်ဤယုံကြည်ချက်များအကြားယခင်ကသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသီးအသီးအမျိုးအစားအဘို့, အမြင်အာရုံအကြောင်းအရာတစ်ခုစပိုင်းတွင်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုတခါအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်အကြောင်းအရာထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်ကိုပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, လိင် Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအမြင်အာရုံအကြောင်းအရာ (မဂ္ဂဇင်းအတွက်ဥပမာဓာတ်ပုံများကို) မှထိတွေ့မှုပထမဦးဆုံးမှာသိသိသာသာလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနဲ့အတူ related စေခြင်းငှါသော်လည်း, ဒီအသင်းအဖွဲ့လိင် Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအသံ-အမြင်အာရုံအကြောင်းအရာ (ဥပမာသောအခါထိတွေ့မှုပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းငှါ , ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်) စဉ်းစားသည်။ စုံလင်သော hierarchical ပုံစံများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသံ-အမြင်အာရုံအကြောင်းအရာနောက်ဆုံးမှာသာထိတွေ့မှု (ဥပမာ, ဗီဒီယိုတွင်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်မှာရုပ်ရှင်များတွင်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနှင့်အတူဆက်နွယ်နေမည်ဖြစ်သည်။
တစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပြီး hierarchical ပုံစံနှစ်ခုလုံး၏အသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားရနိုင်ပေမယ့်, လက်ရှိသုတေသနအထောက်အထားများကိုတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်အမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့အယူအဆအကြားအသင်းအဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်. ပေါ်ပေါက်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိသည်နှစ်ခု၏ထားတဲ့သတ်မှတ်ခွင့်ပြုမထားဘူး လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သအောက်ပါသုတေသနမေးခွန်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲပြီး။
RQ 1: တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေအကြားစပ်လျဉ်းပိုကောင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသို့မဟုတ် hierarchical အဖြစ်ဖော်ပြခံရနိုင်သလား?
လိင်, Aubrey et al အတွက်ယေဘုယျကျား, မကွဲပြားမှု၏သုံးသပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ( 2003 ) ကယောက်ျားမိန်းမတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာကွဲပြားခြားနားတုံ့ပြန်စေခြင်းငှါအကောင့်သို့ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ပြသခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာမိန်းမနှင့်ပျှမ်းမျှခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပေါ်တွင်လူတို့သညျမိမိတို့၏မိတ်ဖက်မှ ပို. လိင်မျှော်လင့်ထားကြောင်းလက်ရှိသုတေသနကနေကောက်ချက်ချ; ပိုပြီးမကြာခဏအပန်းဖြေဘို့လိင်ရှိသည်, ဆက်ဆံရေး, အကြောင်းပြချက်များအတွက်အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိ; နှင့်ပိုပြီးအလိုလိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများဖြင့်ကိုင်ထားပါ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆစံနေဆဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအလားတူအမျိုးအစားများမိန်းမတို့အဘို့ထက်ယောက်ျားပိုမိုသင့်လျော်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့အညီတည်ရှိနေသေးသည်။ အမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါယုံကြည်ချက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွဲပြားသောဤအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင်အတော်ကြာချိတ်ဆက်ခံရဖို့ပုံရသည်။ တစ်သီအိုရီရှုထောင့်ကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ယေဘုယျကျားမကွဲပြားမှု, အရှင်လိင်တ္ထုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေအကြားစပ်လျဉ်းတိကျတဲ့ကျား, မကွဲပြားမှုသို့ဘာသာပြန်ဆိုလိမ့်မည်။
သို့သော်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားမှုအပေါ်ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနအတန်ငယ်အပြီးအပြတ်ကောက်သည်။ Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာ, ရပ်ကွက် (များ၏သက်ရောက်မှုအပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ 2002 လိင်မှုဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုဆိုင်ရာရုပ်မြင်သံကြားကလစ်ကိုကြည့်သောအမျိုးသမီးကောလိပ်ကျောင်းသားများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခဲ့သည့်အမျိုးသမီးကောလိပ်များသည်အမျိုးသမီးများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများဖြစ်သည်ကိုပိုမိုသဘောတူလက်ခံကြသည်။ ခြားနားချက်မှာမူတူညီသောအမျိုးအစားများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြသောကောလိပ်ကျောင်းသားအမျိုးသားများအတွက်ဖြစ်သည်။ အထက်တန်းကျောင်းသားများနှင့်လေ့လာမှုကိုထပ်မံပြုလုပ်ရာတွင်ကျား၊ မကွဲပြားမှုမရှိပါ။ လိင်ကွဲပြားမှုအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကြည့်ရှုကြသောကျောင်းသားများသည်မည်သည့်ကျား၊ မမရွေးထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေရှိကျောင်းသားများထက်လိင်မှုဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏အယူအဆကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည် (Ward & Friedman, 2006 ).
လိင်မှုကိစ္စမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုတုံ့ပြန်မှုတွင်ကျား၊ မကွဲပြားမှုများအပေါ်သုတေသနပြုခြင်းတွင်အားလုံးပါဝင်နိုင်မှုမရှိခြင်းသည်အမျိုးသမီးများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများဖြစ်သည်ဟူသောယုံကြည်ချက်နှင့်တူသောသဘောထားများကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆပ်ပြာနှင့်တေးဂီတဗီဒီယိုများတွင်ရုပ်မြင်သံကြား၌လိင်အကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့မှုအကြားဆက်စပ်မှုသည်အထီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (ဥပမာ Strouse & Buerkel-Rothfuss) တို့ထက်အမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကြားတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည် 1995 ; Strouse၊ Goodwin နှင့် Roscoe၊ 1994 ) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အမျိုးသမီးများအားလိင်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများအဖြစ်ပုံဖော်သည့်မဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာများနှင့်ထိတွေ့မှုကြောင့်အမျိုးသားကောလိပ်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ရွယ်တူချင်းများထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစရိုက်လက္ခဏာများကိုပိုမိုလက်ခံလာစေခဲ့သည် (Lanis & Covell, 1995 ; MacKay & Covell 1997 ) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကအနည်းဆုံးနှစ်ခုလေ့လာမှုများကအမျိုးအစားနှင့်ယောက်ျား, မိန်းမပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (Aubrey et al ကြောင့်ထိခိုက်နေကြခြင်းရှိမရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်အမျိုးအစားအပေါ်မူတည်ခြင်းအလိုငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 2003 ; ရပ်ကွက် & Rivadeneyra, 1999 ) ။ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များမတူကွဲပြားမှု၏ရလဒ်အဖြစ်သာမြီးကောင်ပေါက် '' ကျားဟာသူတို့ရဲ့တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတွေ့မှုနှင့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေအကြားဆက်ဆံရေးပုံမှန်ဖြစ်သွားစေခြင်းငှါကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျဤစိစစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုကြည့်ထို့ကြောင့်သုတေသနမေးခွန်းတစ်ခုကိုရေးဆွဲပြီးစေခြင်းငှါ, ဘယ်လိုသတ်မှတ်နိုင်မ:
RQ 2: အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာရန်မြီးကောင်ပေါက် '' ကျား, မတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူတို့ရဲ့ထိတွေ့မှုနှင့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေအကြားစပ်လျဉ်းအလယ်အလတ်သနည်း?
လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုယုံကြည်ချက်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအပေါ်ယခင်သုတေသနလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေ, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆက်စပ်ရှိသည်အကြံပြုထားသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ, မီဒီယာထိတွေ့မှုအပေါ်အာရုံစိုက်နှင့်အတူဤဆက်စပ်မှုမြီးကောင်ပေါက်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေအတွက်ကွာခြားထို့ကြောင့်အဘို့ထိန်းချုပ်ရပါမည်အဘယ်ကြောင့်များအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းလင်းချက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ variable တွေကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ရပ်ကွက် ( 2002 ) ပိုပြီးလိင်အတွေ့အကြုံရမြီးကောင်ပေါက်နည်းသောလိင်အတွေ့အကြုံရမြီးကောင်ပေါက် (ရပ်ကွက်, လုပ်ခဲ့တယ်ထက်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အားကောင်းအယူအဆတွေကျင်းပကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် 2002 ) ။ လူမှုရေး variable တွေကိုနှင့်စပ်လျဉ်းသုတေသနယောက်ျားနှင့်ယောက်ျားလေးများထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်ချက် (ရပ်ကွက်ထောက်ခံမှအမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများထက်ပိုများပါတယ်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်, 2002 ; ရပ်ကွက်နှင့်ဖရီဒ်မန်း 2006 ) ။ ယဉ်ကျေးမှုအ variable တွေကိုရည်မှတ်ရပ်ကွက်မှာလည်းလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေအပေါ်လူမျိုးရေးတစ်ခုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ နယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်တူရကီနှင့်အဘိဓါန် Moroccan ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလူနည်းစုဒတျချြဆယ်ကျော်သက်အများစုမှမိမိတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ကွာခြားမသာပေမယ့်ပွဲတစ်ပွဲလည်း, Rutgers Nisso အဖွဲ့ (ကျား, မဆက်ဆံရေးပိုမိုရိုးရာအမြင်များကိုင် 2005 ) ။ ရလဒ်အဖြစ် Non-ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်အမျိုးသမီးများကိုလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်ကျင်းပရန်ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်ထက်ပိုနိုင်ဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေအပေါ်သုတေသနပြုခြင်းမှရလဒ်များကိုနှင့်အတူအံ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေအပေါ်သုတေသနကပို compellingly လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးတွေအကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ယုံကြည်မှုများအကြားအလားအလာကြားဆက်ဆံရေးကိုစမ်းသပ်ဖို့အောက်ပါ, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ variable တွေကိုဆန်းစစ်ဖို့အပြင်အသုံးဝင်သောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အပိုဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ variable တွေကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဆယ်ကျော်သက် '' pubertal status ကိုနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးဟာ status ကိုလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေလျော့ကျစေနိုင်သည်။ အသက်အရွယ်အပြင်, pubertal status ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဇာတ်စင်တစ်ခုသိကောင်းစရာများညွှန်ပြချက်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အမျိုးသမီးတွေကြောင့်ရပ်ကွက် (လိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်၏တသမတ်တည်းအောက်ပိုင်းထောက်ခံချက် 2002 အထက်တန်းကျောင်းသားများ (Ward & Friedman၊ 2006 ), အပျိုဖော်ဝင် status ကိုနှင့်ဤယုံကြည်ချက်အကြားအလားအလာအနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုအချို့ကန ဦး သက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်အရေးကြီးသောဖွံ့ဖြိုးမှုခြေလှမ်းဖြစ်သည် (Miller, Christopherson, & King, 1993 ) နှင့်လူယောက်ျားဖြစ်စေ, မိန်းမဖြစ်စေဖြစ်ခြင်းပါဝငျသောအရာကိုသို့ပိုပြီးထူးခြားထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်ပေးနိုငျသညျ။ ရလဒ်အဖြစ်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ဆယ်ကျော်သက်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးကြည့်ဖို့တစ်ခုတည်းနေသောဆယ်ကျော်သက်ထက်လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်နေတဲ့အလားအလာ confounding variable ကိုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။ တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အရေးပါသောတာဝန်လက်ဆောင်နှင့်လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့လိင်တူချစ်သူဆယ်ကျော်သက်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများမိမိတို့၏အမြင်များအတွက်လိင်ကွဲမြီးကောင်ပေါက်ကနေကွဲပြားနိုင်သည်။
အပိုဆောင်းလူမှုရေးပြောင်းလဲမှုများကိုကြည့်လျှင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လူမှုစီးပွားရေးနောက်ခံနှင့်၎င်းတို့၏ပညာရေးသည်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများအပေါ်သူတို့၏ယုံကြည်ချက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အဆင့်မြင့်ပညာရေးနှင့်နိမ့်သောလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေများသည်အမျိုးသမီးများလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပိုမိုထောက်ခံမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Glick, Lameiras, & Castro, 2002 ; Townsend, 1993 ) ။ ဤအရာသည်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများကဲ့သို့အယူအဆတူအမျိုးသမီးများ၏အယူအဆနှင့်လည်းသက်ဆိုင်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်နောက်ထပ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအနေဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ဘာသာတရားသည်အမျိုးသမီးများအားလိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဘာသာရေးအရလိင်မှုကိစ္စသည်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာအမြင်များကိုလျော့နည်းစေသည် (Le Gall, Mullet, & Shafighi, 2002 ).
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအရှိဆုံးအထူးအင်တာနက်ပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ပြီ, လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများတွင်ထိတွေ့ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများ၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစားသုံးမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော် Greenfield ( 2004 ) နှင့်မစ်ချယ်, Finkelhor နှင့် Wolak ( 2003 ) Pop-up windows သို့မဟုတ် spam များကိုအီးမေးလ်ကတဆင့်ဥပမာအားဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်မြီးကောင်ပေါက် '' အမှတ်တမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းနှင့်ထိတွေ့စေခြင်းငှါ, ထိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ပါပြီ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဒီအမလိုလားသောထိတွေ့လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆယ်ကျော်သက် '' အယူအဆတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ တတ်နိုင်သမျှကျွန်မတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုအဖြစ်တိကျခိုင်မာစွာလုပ်, ငါတို့အရပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ On-line ကိုပစ္စည်းမှအမှတ်တမဲ့ထိတွေ့မှုအတှကျအထိန်းချုပ်ထား။
အကျဉ်းချုပ်တှငျကြှနျုပျတို့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု variable တွေကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, pubertal အခြေအနေ, အသက်အရွယ်, ကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေ, နှင့်လိင်တိမ်းညွတ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်တွင်ထည့်သွင်း; လူမှုရေးထိန်းချုပ်မှု variable တွေကို, ကျား, မ, ပညာရေးနှင့်လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်းသကဲ့သို့, ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု variable တွေကို, လူမျိုးရေးနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုသကဲ့သို့, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ On-line ကိုပစ္စည်းမှအပိုဆောင်းထိတွေ့ variable ကိုအမှတ်တမဲ့ထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု, နယ်သာလန်, မကြာခဏဆယ်ကျော်သက်လိင် (ဥပမာ, UNICEF ၏ကိစ္စရပ်များဆီသို့ယင်း၏တိုးတက်သောချဉ်းကပ်ဘို့အညွှန်းထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်ကောက်ယူခဲ့သည် 2001 ) နှင့်လိင်မီဒီယာအကြောင်းအရာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောပြissuesနာများနှင့်ပတ်သက်သည့်၎င်း၏လစ်ဘရယ်မူဝါဒ (Drenth & Slob, 1997 ). ထို့အပွငျ, နယ်သာလန်, ကုလသမဂ္ဂ '' ကျား-related ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအညွှန်းကိန်းနှင့်၎င်း၏ကျားလုပ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းအတာ (ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်၏အဆိုအရကမ္ဘာ၏ထိပ်တန်းတစ်ဆယ်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့တွင်အများဆုံး 2001 ) ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်၊ ဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက်များ၏မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်သည်အခြားကြွယ်ဝသောအနောက်နိုင်ငံများရှိဆယ်ကျော်သက်များ၏မီဒီယာပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သိသိသာသာကွာခြားပုံမပေါ်ပါ။ အထူးသဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်သည်အမေရိကန်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်နှင့်ဆင်တူသည်။ စီးရီးနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုအမေရိကန်မှတင်သွင်းသည် (Valkenburg & Janssen, 1999 ) ။ ထို့အပြင်နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အိမ်တွင်းအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှုန်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အချိုးအစားသည်အခြားနိုင်ငံများထက်ပိုမိုမြင့်မားသော်လည်းဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက်များ၏အမှန်တကယ်အင်တာနက်ကိုအခြားနိုင်ငံများရှိဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကွဲပြားမှုမရှိပုံ (ဥပမာ - Valkenburg & Peter) , စာနယ်ဇင်းအတွက် ).
နယ်သာလန်ဤလက္ခဏာများပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကအရမ်းကောင်းစွာသင့်လျော်ဆပ်။ ကျနော်တို့ကတခြားကြွယ်ဝသောအနောက်နိုင်ငံများမှတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိပါကြောင်းရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်များ၏အန္တရာယ်အပြေးခြင်းမရှိဘဲ, လိင်ကောင်းစွာပညာတတ်မြီးကောင်ပေါက်အကြား, အင်တာနက်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောမီဒီယာ, ကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတစ်ခုစဉ်ဆက်မှထိတွေ့မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ထို့အပြင်, ဒတျချြအမျိုးသမီးများအတော်လေးဘာလဲဆိုတော့အားကောင်းတဲ့အခန်းကဏ္ဍလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများမီဒီယာပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုဆန့်ကျင်နေတဲ့ခိုင်မာတဲ့ counterforce တင်ပြစေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုများအကြားဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေခဲ့ကြလျှင်, ငါတို့သည်မကြာမီအခြားနိုင်ငံများတွင်တွေ့ရှိစေခြင်းငှါတစ်ဖြစ်ရပ်ဆန်း၏ကနဦးသက်သေအထောက်အထားများရှိသည်မယ်လို့မသာ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုလည်းရှိသည်မယ်လို့ ကျား, မကျပုံစံ defining အတွက်မီဒီယာရဲ့အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ၏နောက်ထပ်လက္ခဏာ။
၂၀၀၅ ခုနှစ်မတ်လနှင့်Aprilပြီလတွင်အသက် ၁၃ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အကြားဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက် ၇၄၅ ဦး (ယောက်ျားလေး ၄၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ မိန်းကလေး ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း) တို့အကြားအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် (M = 15.5, SD = 1.69) ။ ဖြေဆိုသူ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဒတ်ခ်ျလူမျိုးများဖြစ်ပြီးကျန် ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာအခြားတိုင်းရင်းသားအုပ်စုများမှဖြစ်သည်။ အထိခိုက်မခံသောပြissuesနာများကိုလေ့လာရန်၊ အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများသို့မဟုတ် ပို၍ ယေဘုယျအားဖြင့်ကွန်ပျူတာဖြင့်ပြုလုပ်သောစစ်တမ်းများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများထက်သာလွန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည် (ဥပမာ Mustanski၊ 2001 ) ။ ဖြေဆိုသူ Intomart GfK, နယ်သာလန်တစ်ခုထူထောင်ပရိသတ်ကိုနှင့်မီဒီယာသုတေသနဌာနကစီမံခန့်ခွဲရှိပြီးသားအွန်လိုင်း panel ကကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ နမူနာများနှင့်ကွင်းဆင်း Intomart GfK ပြုခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြေဆိုသူ '' လူမှုကွန်ယက်ကတဆင့်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျပန်းတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးမှတဆင့်, နယ်သာလန်၌ရှိသမျှသောအစိတ်အပိုင်းများထဲတွင်ဖြေဆိုသူနမူနာများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတုံ့ပြန်ရာမှမေတ္တာရပ်ခံခဲ့မြီးကောင်ပေါက်သုတေသနအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူမှီ, အရွယ်မရောက်သေးသူများအတွက်, မိဘသဘောတူခွင့်ပြုချက်သဘောတူညီခကျြကိုအသိပေးပါ။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည် 60% ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာကျားမ, အသက်, ငါတို့ဖြေဆိုသူတရားဝင်ပညာရေးအရာရှိတဦးကစာရင်းဇယားကနေသွေဖည်မပြုခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ စစ်တမ်းများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုမတိုင်မီကအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်မှရရှိသောခဲ့သည်။
မြီးကောင်ပေါက်လေ့လာမှုလိင်နှင့်အင်တာနက်အကြောင်းကိုပါလိမ့်မယ်နဲ့သူတို့အလိုရှိပါလျှင်, သူတို့ကမည်သည့်အချိန်ကပါဝင်မှုကိုရပ်တန့်နိုင်ကြောင်းအသိပေးခံခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့လျှို့ဝှက်ချက်များ, အမည်ဝှက်နှင့်တုန့်ပြန်မှုလုပ်ငန်းစဉ် (Mustanski ၏ privacy ကိုတိုးတက်လာဖို့အတော်ကြာခြေလှမ်းများကို ယူ. , 2001 ) ။ အွန်လိုင်းမေးခွန်းပုံစံ၏နိဒါန်းဖန်သားပြင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အဖြေများကိုအဓိကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကသာကျွန်ုပ်တို့အားဆန်းစစ်လိမ့်မည်ဟုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဖြေဆိုသူများကိုသူတို့ကမေးခွန်းလွှာကိုလျှို့ဝှက်စွာဖြည့်ထားကြောင်းသေချာစေရန်မေးမြန်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဖြေကြားသူများအားသူတို့၏အဖြေများသည်အမည်မသိဖြစ်နေလိမ့်မည်ဟုအာမခံခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည်မေးခွန်းလွှာကိုမည်သူဖြည့်စွက်ကြောင်းဖော်ထုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Intomart GfK မှဖြေကြားသူများဖြေကြားခဲ့သည့်အဖြေကိုမမြင်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်းလင်းစွာရှင်းပြခဲ့သည်။ Intomart GfK သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းလွှာတွင်ဖြေကြားသူများ၏အဖြေများကိုသူတို့၏အမည်များနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိဘဲနောက်ခံ variable များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းလွှာ၏အဖြေများကိုသာပေးခဲ့သည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အထိခိုက်မခံသောကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားလေ့လာမှုများစွာတွင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြေကြားသူများ၏လျှို့ဝှက်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။ မေးခွန်းလွှာကိုဖြည့်စွက်ခြင်းသည် ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။
အဆိုပါဆုတ်ယုတ်ဤဆောင်းပါး၌ပေးအပ်လေ့လာဆန်းစစ်ဘို့ကျနော်တို့မေးခွန်းလွှာစတင်ခဲ့သော 674 ဖြေဆိုသူ 745 ကနေပြီးပြည့်စုံသောဒေတာများရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုကျနော်တို့အပြည့်အဒေတာရှိခဲ့ဘယ်သူကိုများအတွက် 674 ဖြေဆိုသူအဓိပ္ပါယ်ရှိစွာကျနော်တို့အပြည့်အဒေတာရှိကြအကြင်ဖြေဆိုသူထံမှသွေဖည်မပြုခဲ့, အသက်, လိင်, လူမျိုးရေးနှင့်တရားဝင်ပညာရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ထိုညွှန်ပြ။
မဂ္ဂဇင်းအတွက်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှ exposure
ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်အချို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (ဥပမာပါဝင်သည်သုံးခုဒတျချြမဂ္ဂဇင်းများမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်အတူဤအယူအဆ operationalized, Actueel) ။ ဤရွေ့ကားမဂ္ဂဇင်းတစ်အပန်းဖြေတိမ်းညွတ်ရှိသည်။ သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်အနည်းငယ် sensationalist လမ်းအတွက်, အားကစား, ရာဇဝတ်မှုနှင့် erotica အကြောင်းကိုသတင်းပို့ပါ။ မြီးကောင်ပေါက်သူတို့များသောအားဖြင့်ဖတ်ပါမည်မျှတစ်ဦးအထူးသဖြင့်မဂ္ဂဇင်း၏ကိစ္စရပ်များကိုဟုမေးကြသည် ဟူ. ၎င်း, 1 (ထံမှအထိတုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားအဘယ်သူမျှမ) (7 မှအားလုံးကိစ္စများ) ။ အဆိုပါအချက်ဖွဲ့စည်းပုံ ((ကှဲလှဲ 80% ကရှင်းပြခဲ့သည်) uni-ရှုထောင်ကြီးနှင့် .87 တစ် Cronbach ရဲ့အာလဖအတွက်ရလဒ်M = 1.27, SD = .82) ။
ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှ exposure
ကျနော်တို့ကိုသူတို့ရုပ်မြင်သံကြား programming ကိုအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသောအရာကိုအတိုင်းအတာအထိမြီးကောင်ပေါက်မေးမလျှောက်သောမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်ဆွဲအားဖြင့်ဒီအတိုင်းအတာ operationalized ။ အကြောင်းအရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (ဥပမာ Kunkel et al ကနေရလဒ်တွေကိုအပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အခြေခံ. ။ , 2005 ; Pardun et al ။ , 2005 ; ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, ရပ်ကွက်ကိုမြင်ရ, 2003 လူမှုဘဝသရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်း (ဥပမာ:) ကျနော်တို့ကအနည်းဆုံးအချို့လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာတင်ပြကြောင်းရုပ်မြင်သံကြားအမျိုးအစားများပါဝင်သည် ကောင်းသော Times သတင်းစာ, မကောင်းပါ Times သတင်းစာ), ဂီတရှိုးပွဲ (ဥပမာ, ပေါ် MTV), ဟာသစီးရီး (ဥပမာ, သူငယ်ချင်းများ, မြို့၌လိင်), ရင်ခုန်စရာရုပ်ရှင် (ဥပမာ, ဘယ်အချိန်မှာဟယ်ရီ Met လီ), ရင်ခုန်စရာပြပွဲ (ဥပမာ, မင်းလိုနေတာအချစ်ပဲ) နှင့်အရေးယူစီးရီး (ဥပမာ, 24, JAG) ။ တုန့်ပြန်အမျိုးအစား (1 ထံမှအရွယ်ရှိမဟုတ်စိတ်ဝင်စားမှာအားလုံး) (4 မှအလွန်စိတ်ဝင်စား) ။ အတိုင်းအတာ၏အချက်ဖွဲ့စည်းပုံ unidimensional ခဲ့ (ကှဲလှဲ 42% ကရှင်းပြခဲ့သည်), Cronbach ရဲ့ alpha (.72 ခဲ့သည်M = 2.82, SD = .69) ။
မဂ္ဂဇင်းအတွက်လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှ exposure
ဤသည်ကိုအတိုင်းအရှည်နှစ်ပစ္စည်းများ-မြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်အတူ operationalized ခဲ့သည် Playboy နှင့် Penthouse။ မြီးကောင်ပေါက်များ၏မည်မျှကိစ္စရပ်များကိုညွှန်ပြခိုင်းတယ် Playboy နှင့် Penthouse သူတို့များသောအားဖြင့်ဖတ်ပါ, နှင့်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစား 1 (ထံမှအရွယ်ရှိအဘယ်သူမျှမ) (7 မှအားလုံးကိစ္စများ) ။ .80, Cronbach ရဲ့ alpha မှာဆက်နွယ်နေကြောင်းနှစ်ခုပစ္စည်းများ (.89 ခဲ့သည်M = 1.16, SD = .71) ။
ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှ exposure
ဤသည်ကိုအတိုင်းအရှည် (သုံးလိင် Semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များမှထိတွေ့မှု၏မြီးကောင်ပေါက် '' ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူ operationalized ခဲ့သည်Sexcetera, လိင်တရားရုံး, လက်တင်ချစ်သူ) ။ အဆိုပါဖြေဆိုသူအတိတ်နှစ်, သူတို့ပျမ်းမျှသုံးယောက်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပုံကိုမကြာခဏမေးခဲ့ကြသည်။ တုန့်ပြန်အမျိုးအစား (1 ထံမှအရွယ်ရှိဘယ်တော့မှ) (5 မှအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်) ။ သုံးယောက်ပစ္စည်းများကိုအချက်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့ဝငျခဲ့ကြတဲ့အခါသူတို့ (ကှဲလှဲ 78% ကရှင်းပြခဲ့သည်) တစ်ဦး unidimensional စကေးဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Cronbach ရဲ့ alpha (.85 ခဲ့သည်M = 1.28, SD = .59) ။
ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာထိတွေ့ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုကနေလည်းမျက်မြင်လက်တွေ့သိသာစွာကွဲပြားခဲ့ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ပစ္စည်းများကိုနှစ်ခုအကြေးခွံအတှကျအသုံးပွုနှင့် varimax လည်ပတ်နှင့်အတူတစ်အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့သူတို့ကိုအကြောင်းမဲ့ z-အသွင်ပြောင်း။ ရရှိလာတဲ့နှစ်ခုအချက်များအတိအကျနှစ်ခု Construction မျက်မြင်လက်တွေ့လွတ်လပ်သောဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြပေးသောနှစ်ခုအကြေးခွံများမည့်, ထင်ဟပ်။
မြီးကောင်ပေါက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်အတိတ်ကာလတစ်နှစ်အတွင်းခေါ်ဆောင်သွားမဂ္ဂဇင်းများကိုဖတ်ရှုဘယ်လောက်မကြာခဏသူတို့ခဲ့ညွှန်ပြခိုင်းတယ်။ တုန့်ပြန်အမျိုးအစား (1 ထံမှအရွယ်ရှိဘယ်တော့မှ) (5 မှအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်()M = 1.35, SD = .76) ။ ဒတ်ခ်ျတွင်ဟူသောဝေါဟာရကို ခေါ်ဆောင်သွားမဂ္ဂဇင်း မကြာခဏ unconcealed, ဆင်ဆာပိတ်ထားသောဝက်ဆိုက်များပေါ်မှနည်းလမ်းတွေထဲမှာအင်္ဂါဇာတ်ကိုတင်ပြပေးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒတျချြမဂ္ဂဇင်းများ, အဘို့စကားလုံးနုလှတွေနဲ့, ပါးစပ်နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဂ္ဂဇင်း (ဆိုလိုသည်မှာခေါ်ဆောင်သွားမဂ္ဂဇင်း) မှထိတွေ့မှုရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့လိင် Semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမဂ္ဂဇင်း (ဆိုလိုသည်မှာမှထိတွေ့မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ရာမှကွဲပြားခြားနားသောခဲ့တယ်, Playboy နှင့် Penthouse), ကျနော်တို့သုံးယောက်ပစ္စည်းများဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ခေါ်ဆောင်သွားမဂ္ဂဇင်းများမှထိတွေ့မှုသာအတန်အသင့်ထိတွေ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် Playboy, r = .24, p <.001 နှင့် Penthouse, r = .15, p <.001 အတော်လေးနိမ့်ဆက်စပ်မှု (၏ဒတ်ခ်ျဗားရှင်းမှာပြထားတဲ့အတိုင်း) လိင် Semi- ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းထိတွေ့မှုအကြားမျှော်လင့်ထားသည့်ခြားနားချက်ကိုထောကျပံ့ Playboy နှင့် Penthouse) နှင့်ဒတ်ခ်ျခေါ်ဆောင်သွားမဂ္ဂဇင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း။
ဗီဒီယိုက / DVD ကိုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှ exposure
အဆိုပါဖြေဆိုသူအတိတ်နှစ်, သူတို့က, ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်ဦးညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပုံကိုမကြာခဏမေးခဲ့ကြသည်။ တုန့်ပြန်အမျိုးအစား 1 (ထံမှနောက်တဖန်အရွယ်ရှိဘယ်တော့မှ) (5 မှအကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်()M = 1.43, SD = .90) ။
လွန်ခဲ့သော (၆) လအတွင်းလူတို့သည်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည့်အွန်လိုင်းဓာတ်ပုံများကိုပျမ်းမျှအားမည်မျှကြည့်ရှုခဲ့ကြသနည်းဟုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်များအားမေးမြန်းခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားများမှာ6(ဘယ်တော့မှ),2(တစ်လတစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်း),3(1-3 ကြိမ်လ),4(တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်),5(အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်), နှင့်6(နေ့တိုင်း), (M = 1.87, SD = 1.29) ။
ဆယ်ကျော်သက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်လွန်ခဲ့သော (၆) လကလူများသည်လိင်ဆက်ဆံသည့်အွန်လိုင်းပေါ်မှရုပ်ရှင်များ၊ ရုပ်ရှင်ကားများကိုမည်မျှမကြာခဏကြည့်ရှုခဲ့ကြသနည်းဟုကျွန်ုပ်တို့သည်ဆယ်ကျော်သက်များအားမေးမြန်းခဲ့သည်။ တုန့်ပြန်မှုအမျိုးအစားများသည်အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည် (M = 1.82, SD = 1.28) ။
pre-စမ်းသပ်မှုမြီးကောင်ပေါက်ကျွန်တော်တို့ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ On-line ကိုပုံနဲ့ရုပ်ရှင်ထိတွေ့မှုတိုင်းတာဖို့အသုံးပြုကြောင်းနှစ်ခုပစ္စည်းများများ၏ content အဖြစ်ပိုပြီးပီပီရှင်းလင်းချက်မလိုအပ်ခဲ့ဘူးကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြေဆိုသူနှစ်ခုပစ္စည်းများလိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာတို့ကိုမိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့အဓိကအား (ရပ်ကွက်များကတစ်ဦးမည့်နောက်တော်သို့လိုက် 2002 ), ဒါပေမဲ့ဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်အကြားအသုံးပြုမှုများအတွက်အနည်းငယ်ကချိန်ညှိ။ ထို့အပွငျ, ငါတို့ (ဆိုလိုသည်မှာ "မသိစိတ်, မိန်းကလေးတွေအမြဲလိင်ရှိသည်ဖို့ဖျောင်းဖျခံရဖို့လိုခငျြ" ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လိင်ရည်ညွှန်းနှစ်ခုပစ္စည်းများနှင့်အတူ (ဆိုလိုသည်မှာ, Shape အမျိုးသမီးတွေမှာမြည်ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးများသည်ယောက်ျားဂုဏ်သိက္ခာပေး) ရပ်ကွက်ရဲ့မူလစကေးနှစ်ခုပစ္စည်းများအစားထိုးခြင်းနှင့် ) "လိင်တက်ကြွမိန်းကလေးတွေပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြသည်" ။ တုန့်ပြန်အမျိုးအစား (1 ထံမှအရွယ်ရှိလုံးဝသဘောမတူ) (5 မှလုံးဝသဘောတူ) ။ varimax လည်ပတ်, မျက်နှာနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သီးခြားအချက်ပေါ်တင်ဆောင်ယောက်ျားဆွဲဆောင်ဖို့အမြိုးသမီးမြားရဲ့အသှငျအပွငျ၏အရေးပါမှုကိုဆက်ဆံကြောင်းရပ်ကွက်ရဲ့စကေး၏သုံးပစ္စည်းများနှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲအချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌တည်၏။ ရလဒ်အနေနဲ့ကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာရပ်ကွက်ရဲ့စကေးအနေဖြင့်ကျန်ရှိနေသေးသောသုံးပစ္စည်းများနှင့်အတူလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏ concept ကိုတိုင်းတာ (ဆိုလိုသည်မှာ "တစ်ခုကဆွဲဆောင်မှုအမြိုးသမီးတလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာမျှော်လင့်ထားသင့်သည်," "ယောက်ျားသည်သာသူမပါလျှင်တစ်ဦးအမြိုးသမီးမြားကိုစိတ်ဝင်စားအခါဒါဟာငါ့ကိုနှောင့်အယှက် တော်တော်လေးရှိ၏ ") ပေါင်းကျနော်တို့ကဆက်ပြောသည်ခဲ့သောနှစ်ခုပစ္စည်းများ" လူအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ခြင်းမှားဘာမှမရှိဘူး "။ ဤရွေ့ကားငါးပစ္စည်းများကိုတစ် uni-ရှုထောင်စကေး (.50 တစ် Cronbach ရဲ့ alpha နှင့်အတူ, (ကှဲလှဲ 75% ကရှင်းပြခဲ့သည်) ကိုဖွဲ့စည်းM = 2.81, SD = .74) ။
အသက်အရွယ်နှင့်ကျား, မများ၏တိုင်းတာခြင်းရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားလေးများ 0, 1 နှင့်အတူမိန်းကလေးများနှင့်အတူ coded ခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့0ဓိပ်ပာတဲ့ dichotomy အဖြစ်ဖြေဆိုသူ '' ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးရေး operationalized non-ဒတျချြနှင့် 1 အဓိပ်ပာယျ ဒတျချြ.
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ပါးစပ်လိင်နှင့် coital လိင်: ကျနော်တို့သုံးပစ္စည်းများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ operationalized ။ pre-စမ်းသပ်မှုမြီးကောင်ပေါက်စည်းကမ်းချက်များကိုနားလည်မျှပြဿနာများရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူသူတို့သုံးယောက်အပြုအမူတွေထဲကတစ်ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. လုပ်ဆောင်ခဲ့ရှိမရှိဟုမေးခဲ့သည်။ ရလဒ်စကေး၏ log-အသွင်ပြောင်းနှင့်အတူပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအတွေ့အကြုံကို2အဖြစ် coded ခဲ့သည်; တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အပြုအမူနှင့်အတူချို့တဲ့အတွေ့အကြုံကို 1 အဖြစ် coded ခဲ့သည်။ တဦးတည်းအချက်ပေါ်တင်ဆောင်အဆိုပါသုံးပစ္စည်းများ (ကှဲလှဲ 81% ကရှင်းပြခဲ့သည်) ။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးဤပစ္စည်းများကိုချုပ်ဖော်ပြပြီးတော့တစ်စကေးဖွဲ့စည်းရန်ပစ္စည်းများများ၏အရေအတွက်အားဖြင့်သူတို့ကိုကွဲပြား။ ရရှိလာတဲ့ alpha (.88 ခဲ့သည်M = 1.30, SD = .41) ။
ပညာရေးဒတျချြမြီးကောင်ပေါက်နိုင်ပါတယ်မှာကွဲပြားခြားနားသောပညာရေးအဆင့်အတန်း (ကိုယ်စားပြုမယ့် 5-အမှတ်စကေးအပေါ်တိုင်းတာခဲ့သည်M = 2.75, SD = 1.22) ။ တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားများမှာ 1 (မူလတန်းပညာရေး, နိမ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေး),2(အနိမ့်ယေဘုယျအားအလယ်တန်းပညာရေး),3(အလယ်အလတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေး),4(ပိုမိုမြင့်မားသောယေဘုယျအလယ်တန်းပညာရေး, Pre-တက္ကသိုလ်ပညာရေး) နှင့်5(ပိုမိုမြင့်မားသောသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရေး, တက္ကသိုလ်) ။ ဒါဟာနယ်သာလန်အတွက်တူညီသောအသက်ဆယ်ကျော်သက်ပညာရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောတရားဝင်အဆင့်ဆင့်ရှိစေခြင်းငှါ, ထိုမှတ်သားရပါမည်။ ဤသည်ကိုလည်းတစ်ဦးကျိုးနွံဆက်စပ်မှုအတွက်ပြသ r တရားဝင်ပညာရေးနှင့်အသက်အကြား = .23 ။
အဆိုပါအလုပ်အကိုင်နှင့်မိသားစု၏အဓိက breadwinner (ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကမိသားစုအတွက်ပိုက်ဆံအများစုရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး) ၏ပညာရေးအဆငျ့: ဆယ်ကျော်သက် '' လူမှုစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကိုနှစျခုအတိုင်းအတာတစ်ခုပေါင်းစပ်အဖြစ် operationalized ခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ, မိသားစုရဲ့ breadwinner တစ်ဦးအနိမ့်တရားဝင်ပညာရေးရှိပြီးကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောအလုပ်, နိမ့်လူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အတန်းရလဒ်များကိုမပါလျှင်။ ဆနျ့ကငျြတဲ့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီနှင့်ဦးဆောင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနေအထားတွင်တစ်စုံတစ်ယောက်မြင့်မားသောလူမှုစီးပွားအဆင့်အတန်းကိုတာဝန်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦး 5-အမှတ်စကေးဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်နှစ်ခုအစီအမံပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်စကေး၏ကျောက်ဆူး (1 ခဲ့ကြသည်အနိမ့်လူမှုစီးပွားအဆင့်အတန်း) နှင့်5(မြင့်မားသောလူမှုစီးပွားအဆင့်အတန်း) (M = 2.97, SD = 1.28) ။
မြီးကောင်ပေါက်ပစ္စည်းနှင့်အတူဘာသာရေးတိုင်းတာခဲ့သည်ရှိမရှိ "ငါသည်ဘာသာရေးဖြစ်၏။ " တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစား (1 ထံမှအရွယ်ရှိမှာအားလုံးလျှောက်ထားပါဘူး) (5 မှလုံးဝသက်ဆိုင်()M = 2.23, SD = 1.33) ။
Pubertal status ကို
Pubertal status ကို Petersen က Crockett, Richards နှင့် Boxer (ကတီထွင်သည့် Pubertal အခြေအနေစကေးနှင့်အတူ operationalized ခဲ့သည် 1988 ) ။ အဆိုပါစကေးယောက်ျားလေးများ-ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်, အသံပြောင်းလဲမှု, အသားအရေပြောင်းလဲမှု, ကြီးထွားမှု spurt နှင့်မျက်နှာဆံပင်-နှင့်မိန်းကလေးများ-ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်, ရင်သားကင်ဆာပြောင်းလဲမှု, အသားအရေပြောင်းလဲမှု, ကြီးထွားမှု spurt နှင့်ရာသီငါးငါးပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ Petersen et al ကြောင့်အသားအရေပြောင်းလဲမှုကို item ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ကအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကို၏အနည်းဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အနည်းဆုံးခိုင်လုံသောခဲ့ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်4(ထံမှအရွယ်ရှိတဲ့ 1-အမှတ်စကေးအပေါ်ညွှန်ပြနိုင်မစတင်ရသေး) (4 မှပြီးသားကိုလက်စသတ်လိုက်ပါတယ်) တစ်ဦးချင်းစီကိုယ်ထင်ရှားပြောင်းလဲမှုပြီးသားစတင်နေပြီခဲ့သောသို့မဟုတ်ပြီးသားကိုလက်စသတ်ခဲ့ရှိမရှိ။ တရားဝင်မှုအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျနော်တို့တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားနှင့်အတူမိန်းကလေးများမပေးခဲ့ပါဘူး ပြီးသားကိုလက်စသတ်လိုက်ပါတယ် အဆိုပါရာသီကို item သည်။ အတိုင်းအတာ၏ပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (ယောက်ျားလေးများအဘို့အ .89 ခဲ့သည်M = 2.91, SD = .83) နှင့်မိန်းကလေးများအဘို့ .82 (M = 3.19, SD = .56) ။
relationship status ကို
မြီးကောင်ပေါက် '' ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းကို "သင်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်လက်ရှိဖြစ်ပါသလား" ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှင့်အတူတိုင်းတာခဲ့သည်တစ်ခုတည်းရှိနသောသူဆယ်ကျော်သက်0(67.9%) coded ကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သူကိုမြီးကောင်ပေါက် 1 (32.1%) coded ခဲ့ကြသည်။
မြီးကောင်ပေါက်သူတို့လိင်တူချစ်သူ / လိင်တူချစ်သူခဲ့ကြသည်ရှိမရှိမေးခဲ့တယ်, ရိုးရိုး, ဒါမှမဟုတ်လိင်ကွဲခဲ့ကြသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာကျနော်တို့လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေအတွက်လိင်ကွဲနှင့် Non-လိင်ကွဲမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အလားအလာရှိသောကွဲပြားခြားနားမှုအဘို့ကိုသာအကောင့်လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ပါဝင်သည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည် Non-လိင်ကွဲမြီးကောင်ပေါက် (coded 0, 6.8%) နှင့်လိင်ကွဲမြီးကောင်ပေါက် (coded 1, 93.2%) သို့ variable ကို dichotomized ။
ဆယ်ကျော်သက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်လွန်ခဲ့သည့် ၆ လအတွင်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်မည်မျှမကြာခဏကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းခဲ့သောလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမှာ (က) ရှင်းလင်းသောထိတွေ့လိင်အင်္ဂါများပါသည့်ဓါတ်ပုံများ၊ (ခ) ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ထုတ်လိင်အင်္ဂါများနှင့်အတူရုပ်ရှင်; (ဂ) လူတို့လိင်ဆက်ဆံသည့်ရုပ်ပုံများ၊ ()) လူတို့လိင်ဆက်ဆံသောရုပ်ရှင်၊ (င) ခေါ်ဆောင်နိုင်သောဆက်သွယ်ရန်ဆိုဒ်များ။ လိင်စိတ်နှိုးဆွသောအဆက်အသွယ်ဆိုဒ်များတွင်လူများသည်လိင်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အခြားလူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောကြော်ငြာသို့မဟုတ်အချိတ်အဆက်များ၏အခြေအနေတွင်ပေါ်လာနိုင်သည်။ တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားများမှာ6(ဘယ်တော့မှ),2(တစ်လတစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်း),3(1-3 ကြိမ်လ),4(တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်),5(အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်ပါတ်), နှင့်6(နေ့တိုင်း) ။ တဦးတည်းအချက်ပေါ်တင်ဆောင်အဆိုပါပစ္စည်းများ (ကှဲလှဲ 67% ကရှင်းပြခဲ့သည်), နှင့် .87 တစ် Cronbach ရဲ့ alpha တွင်ရလဒ် (M = 2.10, SD = 1.11) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနမေးခွန်းများကိုစမ်းသပ်ရန်အဆင့်ဆင့်မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Multiple regression analysis သည် variable များသည်ပုံမှန်ဖြန့်ဝေမှုများရှိသည်ဟုယူဆသော်လည်းလိင်ဆိုင်ရာအစီအမံများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အပြုသဘောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ မျိုးစုံသောဆုတ်ယုတ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမတိုင်မီကမက်ထရစ်ကိန်းရှင်များပုံမှန်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းရှိ / မရှိဆုံးဖြတ်ရန်ပုံမှန်အတွက် Shapiro-Wilk စမ်းသပ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာတရားများ၊ အပျိုဖော်ဝင်အခြေအနေ၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်ထိတွေ့မှုတိုင်းတာမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အသွင်ပြောင်းခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်အချို့သည်အလွန်အမင်းဆက်နွယ်မှုရှိနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် variable များအကြား multicollinearity ၏အထောက်အထားရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ဤသည်မှာမဟုတ်ခဲ့; အားလုံးကှဲလှဲငွေကြေးဖောင်းပွမှုအချက်များရှင်းလင်းစွာ 4.0 ၏အရေးပါသောတန်ဖိုးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Cook-Weisberg စမ်းသပ်မှုကကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံသည် homoskedasticity ၏ယူဆချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်နှင့်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးနှင့်ထိတွေ့မှုအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုစည်းကမ်းချက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျိုးစုံပေါင်းစည်းမှုပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်သူတို့၏နည်းလမ်းများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဗဟိုပြုသည်။ (Aiken & West, 1991 ).
စားပှဲ 1 လေ့လာမှု၏အဓိက variable တွေကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အမျိုးသမီးလိင်အရာဝတ္ထုသောယုံကြည်ချက်မှထိတွေ့မှုများ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများအကြားသုညယူမှုကိုဆက်စပ်မှုတွေ့ရမယ်။ မဂ္ဂဇင်းအတွက်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်ထိတွေ့မှု၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ, အခြားအားလုံးထိတွေ့မှုပုံစံများကိုသိသိသာသာအပြုသဘောအမျိုးသမီးများကိုလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထိတွေ့မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအကြားအသင်းအဖွဲ့များနှစ်ခုပုံစံများမှတ်သားဖွယ်ပုံရသည်။ ပထမဦးစွာရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာထိတွေ့မှာအားလုံးသို့မဟုတ်အဆိုးလိင် Semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသို့မဟုတ်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒုတိယအချက်မှာမဂ္ဂဇင်းအတွက်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှတယ်လီဗေးရှင်းနှင့်ထိတွေ့မှုအပေါ်လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှု, ရုပ်ရှင်များတွင် / DVD ကိုရဲ့, နှင့်အင်တာနက်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျဇယား 1လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏လိုင်းများတလျှောက်တွင်တစ်ဦးထိတွေ့မှုပုံစံအကြံပြုထားသည်။ by နဲ့ကြီးမားတဲ့မြီးကောင်ပေါက်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုပိုနှစ်သက်ဟန်; အထူးသဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှု, ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုနှင့်အတူ related လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုနှင့်အတူထက်ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏ထိတွေ့မှုအစီအမံများနှင့်အယူအဆတွေအကြား zero-အလို့ငှာ Correlate ။
(1) က Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမဂ္ဂဇင်း (ln)
(2) က Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရုပ်မြင်သံကြား (ln)
(3) Semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမဂ္ဂဇင်း (ln)
(4) Semi-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရုပ်မြင်သံကြား (ln)
(5) အကဲဆတ်သောမဂ္ဂဇင်းများ (ln)
(6) အကဲဆတ်သောဓာတ်ပုံများကိုအင်တာနက် (ln)
(7) အကဲဆတ်သောကဗီဒီယို / DVD ကို (ln)
(8) အကဲဆတ်သောရုပ်ရှင်အင်တာနက် (ln)
မှတ်စု။ap <.05,bp <.01, c p <.001 (Two-tailed); (ln) = log- အသွင်ပြောင်း။
မြီးကောင်ပေါက် '' ကျားမိန်းမတို့သည်လိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပုံစံများနှင့်သူတို့၏ယုံကြည်ချက်သူတို့ရဲ့ထိတွေ့ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ လိင်က Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမဂ္ဂဇင်းများမှ exposure (မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများများအတွက်ကွဲပြားဘူးM မိန်းကလေးများ = 1.24, SD မိန်းကလေးများ = .78, M ယောက်ျားလေးများ = 1.29, SD ယောက်ျားလေးများ = .86), t (742) = .86, NS။ ဒါပေမယ့်မိန်းကလေးတွေ ( ပို. မကြာခဏယောက်ျားလေးများထက်ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာ watchedM မိန်းကလေးများ = 3.12, SD မိန်းကလေးများ = .58, M ယောက်ျားလေးများ = 2.50, SD ယောက်ျားလေးများ = .65), t (724) = -13.69, p <.001 မိန်းကလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကယောက်ျားလေးများသည်မဂ္ဂဇင်းများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုသိသိသာသာများများစားသုံးခဲ့သည်။M မိန်းကလေးများ = 1.05, SD မိန်းကလေးများ = .37), M ယောက်ျားလေးများ = 1.29, SD ယောက်ျားလေးများ = .94, t (742) = 4.68, p <.001, ရုပ်မြင်သံကြားမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာ (M မိန်းကလေးများ = 1.13, SD မိန်းကလေးများ = .38, M ယောက်ျားလေးများ = 1.43, SD ယောက်ျားလေးများ = .72), t (732) = 7.21, p <.001၊ မဂ္ဂဇင်းများတွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများ (M မိန်းကလေးများ = 1.17, SD မိန်းကလေးများ = .54, M ယောက်ျားလေးများ = 1.53, SD ယောက်ျားလေးများ = .91), t (732) = 6.64, p <.001, လိင် / ရုပ်ရှင်၊M မိန်းကလေးများ = 1.13, SD မိန်းကလေးများ = .52, M ယောက်ျားလေးများ = 1.74, SD ယောက်ျားလေးများ = 1.09), t (732) = 9.80, p <.001, အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ပုံများ (M မိန်းကလေးများ = 1.40, SD မိန်းကလေးများ = .86, M ယောက်ျားလေးများ = 2.38, SD ယောက်ျားလေးများ = 1.47), t (727) = 11.12, p <.001 နှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ရှင်များ (M မိန်းကလေးများ = 1.37, SD မိန်းကလေးများ = .83, M ယောက်ျားလေးများ = 2.30, SD ယောက်ျားလေးများ = 1.49), t (727) = 10.49, p <.001 မိန်းကလေးများနှင့်မတူဘဲယောက်ျားလေးများသည်မိန်းမများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆများကိုပိုမိုမကြာခဏခံယူကြသည်။M မိန်းကလေးများ = 2.58, SD မိန်းကလေးများ = .67, M ယောက်ျားလေးများ = 3.01, SD ယောက်ျားလေးများ = .73), t (727) = 12.11, p <.001
ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ခုသုတေသနမေးခွန်းများကိုမတူညီရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အမြင်အာရုံနဲ့ audio-အမြင်အာရုံကို formats ကိုဖြတ်ပြီးထိတွေ့မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့နှစ်ခုရှုထောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေး: ပထမဦးဆုံးအသင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသို့မဟုတ် hierarchical ဖြစ်ပြီး, ဒုတိယ, အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာဟာစပ်လျဉ်းမြီးကောင်ပေါက် '' ကျားမအပေါ်မူတည်မှရှိမရှိ ။
အသင်း၏တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသို့မဟုတ် hierarchical သဘောသဘာဝကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ hierarchical မျိုးစုံ Regression ကောက်ယူ (ဇယားကိုကြည့်ပါ 2) ။ ကျမတို့ကအမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်၏အခြားရွေးချယ်စရာရှင်းလင်းချက်ထည့်သွင်းမယ့်အခြေခံမော်ဒယ်နှင့်အတူ hierarchical ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစတင်ခဲ့သည်။ Next ကိုကျနော်တို့အောင်မြင်မှုလိင် Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု (& Models 1 နှင့် 2), လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုနှင့်အတူဆက်လက် (& Models3နှင့် 4) နဲ့စတင်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့်အတူအဆုံးသတ်အမျိုးမျိုးသောထိတွေ့မှုအစီအမံများထဲသို့ဝင် (& Models5နှင့် 6) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဤသုံးမျိုးအဆင့်ဆင့်၏တစ်ဦးချင်းစီမှာကျနော်တို့အနေနဲ့အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင် format နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (ဆိုလိုသည်မှာ, ရုပ်မြင်သံကြား, ဗီဒီယို, သို့မဟုတ်အပေါ်ရုပ်ရှင်ထိတွေ့ခြင်းမပြုမီ (မဂ္ဂဇင်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်အင်တာနက်အပေါ်ဆိုလိုသည်မှာဓာတ်ပုံများကို) တစ်ဦးအမြင်အာရုံ format နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့ထဲသို့ဝင် အင်တာနက်)။ & Models5နှင့်6တှငျကြှနျုပျတို့ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းမှ On-line ကိုထိတွေ့နေတဲ့ခြားနားချက်စေသည်ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့မဂ္ဂဇင်း (မော်ဒယ် 5) တွင်နှင့်ဗီဒီယို / DVD ကို (မော်ဒယ် 6) အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုကနေအင်တာနက်အပေါ်လိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာထိတွေ့ကွဲကွာ ။
လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အမျိုးသမီး၏အယူအဆတွေမှ exposure ။
(N ကို = 674)
ထိန်းချုပ်ရေး variable တွေကို
Pubertal status ကို (ln)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ variable တွေကို
အကဲဆတ်သောဗီဒီယို / DVD ကို (ln)
စုစုပေါင်း R ကို2
စုစုပေါင်း adj ။ R ကို2
မှတ်စု။ap <.05,bp <.01, c p <.001 (t-test, F) -test, Two-Tails; (ln) = log-အသွင်ပြောင်း; ဆဲလ် entries တွေကိုစံချိန်စံညွှန်းမီဆုတ်ယုတ်ကိန်းရှိပါသည်။
စားပွဲတင်၏ဒုတိယကော်လံအတွက်အခြေစိုက်စခန်းမော်ဒယ်2ယောက်ျားနှင့်အငယ်မြီးကောင်ပေါက်အမျိုးသမီးများကိုလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အမျိုးသမီးနှင့်အထက်ဆယ်ကျော်သက်ထက်ယုံကြည်ပြသထားတယ်။ ထို့ပြင်အင်တာနက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိုပိုမိုမကြာခဏအမှတ်တမဲ့ထိတွေ့မှုအမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းအားကောင်းအယူအဆတွေနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးတွေလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းမြီးကောင်ပေါက် '' ဟူသောအယူအဆကိုထိခိုက်အခြားထိန်းချုပ်မှု variable တွေကိုအဘယ်သူအားမျှ။ မော်ဒယ် 1, လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနဲ့အတူသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့အတွက်မရှင်းပြခဲ့ကှဲလှဲတဲ့သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုအတွက်ရလဒ်မဂ္ဂဇင်းများမအတွက်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှု၏ထို့အပြင်အတွက် ΔR2= .001, NS ကျနော်တို့ရုပ်သံအပေါ်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာထိတွေ့ပါဝင်သည်တဲ့အခါမှာမော်ဒယ် 1 ၌ရှိသကဲ့သို့အလားတူရလဒ်များကိုမော်ဒယ်2ပေါ်ပေါက်လာ, ΔR2= .002, NS.
သို့သော်မဂ္ဂဇင်းအတွက်လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှု, မော်ဒယ်3ဝင်အဖြစ်သိသိသာသာအပြုသဘောမော်ဒယ်များ၏ကရှင်းပြသည်ကှဲလှဲတိုးလာသိသိသာသာအမျိုးသမီးများကိုလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်အတူ related နှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်, ΔR2= .006, ΔF(1, 659) = 4.38, p <.05 ။ မော်ဒယ် ၄ ရဲ့ရှင်းပြချက်အရရုပ်မြင်သံကြားမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသိသာထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထိတွေ့မှုကိုထည့်သွင်းတဲ့အခါ၊ ဒီပုံစံရဲ့ကှဲလှဲကှဲလှဲမှုပို။ ΔR2= .024, ΔF(1, 658) = 18.83, p <.001 ရုပ်မြင်သံကြားမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများ၏အယူအဆများသည်လိင်ဆိုင်ရာအရာများဖြစ်သည်။ β = .18, p <.001 လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာမီဒီယာပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများ၏အယူအဆများနှင့်ထိတွေ့မှုအကြားဆက်စပ်မှုရှိအဆင့်ဆင့်ပုံစံနှင့်အညီ၊ မဂ္ဂဇင်းများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့မှုအကြားယခင်ကသိသိသာသာဆက်စပ်မှုသည်သမားရိုးကျအရေးပါမှုအဆင့်အောက်သို့ကျဆင်းသွားသည်။ β = .06, NS, ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာသောအခါထိတွေ့မှုပုံစံတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
မော်ဒယ်5အင်တာနက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုသိသိသာသာအပြုသဘောအမျိုးသမီးများကိုလိင်အရာဝတ္ထုသောယုံကြည်ချက်နှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထား, β = .14, p <.01 ။ လိင်ဆိုင်ရာအတိအလင်းဖော်ပြသောမဂ္ဂဇင်းများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ β = .06, NS။ မော်ဒယ်တွင်ဤနှစ်ခု variable တွေကို၏ပါဝင်မှုကိုသိသိသာသာကရှင်းပြသည်ကှဲလှဲတိုးတက် ΔR2= .014, ΔF(2, 656) = 5.38, p <.01 ။ ရုပ်မြင်သံကြားမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့မှုအကြားဆက်စပ်မှုသည်ပြောင်းလဲမှုအားနည်းနေသော်လည်းသိသာထင်ရှားဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး၊ မော်ဒယ် ၆ တွင်၊ ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဗီဒီယို / ဒီဗီဒီနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ရှင်များနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ လိင်မှုကိစ္စရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ရှင်များကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖော်ထုတ်ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆနှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်နေသည်။ β = .11, p <.05၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောဗီဒီယို / ဗွီဒီယိုများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိပါ။ β = .10, NS နှစ်ခု variable တွေကိုမော်ဒယ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည့်အခါမော်ဒယ်များ၏ကရှင်းပြသည်ကှဲလှဲသိသိသာသာတိုးတက် ΔR2= .011, ΔF(2, 654) = 4.54, p <.01 ။ ယခင်ကအင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်ကိန်းဂဏန်းနှင့်ထိတွေ့မှုအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုပျောက်ကွယ်သွားသည်။ β = .06, NS ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်မှီခို variable ကိုအပေါ်လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုများအကြားအဆိုပါအသင်းအဖွဲ့လည်းမရှိတော့သိသာခဲ့သည် β = .08, NS
တက် Sum မှကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုအမျိုးသမီးတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းအားကောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့ပါသည်, ငါတို့မြော်လင့်သောနှင့်အညီ, တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပိုများသောအထူးသနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဦးဆုံးသုတေသနမေးခွန်းတုံ့ပြန်မှုအတွက်ရလဒ်ကဒီအသင်းအဖွဲ့၏သဘောသဘာဝ hierarchical အဖြစ်အကောင်းဆုံးဖော်ပြထားနိုင်ပြသခဲ့သည်။
တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတွေ့မှုနှင့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏အယူအဆအကြားစပ်လျဉ်းမြီးကောင်ပေါက် '' ကျား, မများကတည်းဖြတ်နေသည်လျှင်, ငါတို့သည်ကျားမနှင့်ထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအကြားသိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ ဤအမှုကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျနော်တို့ရှစ်ထိတွေ့မှုအစီအမံများနှင့်အမျိုးသမီးလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့များအကြားမည်သည့်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။ အလားတူ, မော်ဒယ်မှရှစ်အပြန်အလှန်အသုံးအနှုန်းများထည့်သွင်းသိသိသာသာမော်ဒယ်များ၏ကရှင်းပြသည်ကှဲလှဲမတိုးခဲ့ဘူး, ΔR2= .011, ΔF(8, 646) = 1.12, NS။ လိင်အရာဝတ္ထုယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမှအညီအမျှလျှောက်ထားအဖြစ်ဒုတိယသုတေသနမေးခွန်းတုံ့ပြန်မှုများတွင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်အမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့အယူအဆ၏အသင်းအဖွဲ့အတွက် hierarchical ပုံစံညွှန်ပြ။
ယခင်သုတေသန (ရပ်ကွက်, အလားတူ 2002 ; ရပ်ကွက်နှင့်ဖရီဒ်မန်း 2006 ), ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အားကောင်းအယူအဆတွေနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဘရောင်း et al နေဖြင့်မေတ္တာရပ်ခံအဖြစ်။ ( 2006 ), ကျနော်တို့အထူးမတူညီရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြင့်ထိတွေ့ခြင်းအမျိုးသမီးများကိုလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်အတူဆက်စပ်ပုံကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတွေ့မှုနှင့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေအကြားစပ်လျဉ်းအကြီးအကျယ် hierarchical အဖွစျဖျောပွနိုငျတွေ့ရှိခဲ့: လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်အတူစတင်ကာလိင်အဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များ၏စာရင်းအင်းအရေးပါမှု အရာဝတ္ထုကိုပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အမြင်အာရုံကို formats အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ exposure အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ပုံစံများဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (အင်တာနက်ပေါ်ရှိဆိုလိုသည်မှာ, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်) ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည့်အခါ (ဆိုလိုသည်မှာ, မဂ္ဂဇင်းများနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဓာတ်ပုံများကို) ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနှင့်အတူ၎င်း၏အရေးပါသောစပ်လျဉ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရ. Eအင်တာနက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင် xposure သိသိသာသာအမျိုးသမီးများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ၏အခြားပုံစံများကိုထိတွေ့ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သောအတွက်နောက်ဆုံးဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်အတွက်လိင်တ္ထု, ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောထိတွေ့မှုအတိုင်းအတာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီပုံစံမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးနှစ်ဦးစလုံးမှလျှောက်ထားs.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်မှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှု
ယခင်သုတေသန, ဆယ်ကျော်သက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအစားအစာ (ဘရောင်း et al အပေါ်အခြေခံပြီးအရှိဆုံးအထူးသလေ့လာမှုများနှင့်အညီ။ , 2006 ; သည် L'Engle et al ။ , 2006 ; Pardun et al ။ , 2005 ), ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပိုကောင်းမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်နားလည်နိုင်ရန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှု၏ entity အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ယခင်သုတေသနမတူဘဲသို့သော်ကျွန်တော်တစ်ဦးတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာမတှေ့ပေမယ့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆယ်ကျော်သက် '' အယူအဆတွေနှင့်အမြင်အာရုံနှင့်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ပုံစံများဖြင့်မတူညီကြရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဟာသူတို့ရဲ့ထိတွေ့မှုများအကြားနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦး hierarchical ပုံစံ။ အဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ရဲ့တိကျတဲ့ရလဒ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပုံစံကိုယေဘုယျအားမမှန်ကန်ကြောင်းဆိုလို။ Pardun et al ။ ( 2005 ) သီးခြားစီလိင်ရှိသည်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်ရုပ်မြင်သံကြား, ရုပ်ရှင်, ဂီတ, နှင့်မဂ္ဂဇင်းများမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်သူတို့တစ်တွေတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပုံစံတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစပိုင်းတွင်တစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသို့မဟုတ် hierarchical ပုံစံများ၏ဖြစ်ပျက်မှုကိုလေ့လာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable ကိုအမျိုးအစားအပေါ်မူတည်အံ့သောငှါအကြံပြုထားသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထက်တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတွေ့မှုနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
နောက်ထပ်တစ်ဦးတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသို့မဟုတ် hierarchical ပုံစံပေါ်ပေါက်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏ပုံစံများကိုလေ့လာခဲ့သည့်အပေါ်အပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်, အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုလည်းဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်ဂီတဗီဒီယိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာထိတွေ့မှုတို့ပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ ထို့အပြင်ကအင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင် Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာထိတွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာရရှိသောရလဒ်များကို၏ပုံစံကိုပြောင်းလဲရှိမရှိ။ ကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်နိုင်သည် နောက်ဆုံးအနေနဲ့သုတေသီများလည်းငါတို့အမြင်အာရုံနှင့်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ကို formats ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တွေ့ရှိခဲ့သော hierarchical ပုံစံတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကို formats ၏ရှေ့တော်၌ရရှိထားသူရှိမရှိအသေးစိတ်စမ်းသပ်ဖို့မတူညီရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံပြင်များထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပိုလက်ရှိဖြစ်ကိုသုံးပါ, ပိုကောင်းကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်မှတိုးပွားလာသောသို့မဟုတ် hierarchical ဆက်စပ်ရှိမရှိနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မည် adolescents ထားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၏စာရင်းလွှမ်းခြုံ။
အင်တာနက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင် exposure တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများဟာသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေအကြားဆက်ဆံရေးအတွက် hierarchical ပုံစံများအတွက်အလွန်အရေးပါခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဘရောင်း et al အတည်ပြု။ ရဲ့ ( 2006 လိင်မှုကိစ္စရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများ၊ အထူးသဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်နှင့်အသံပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်များရှိခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်များဖြစ်ပေါ်လာရန်အရေးကြီးသည်။ မြီးကောင်ပေါက်များသည်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများကိုမစားရသော်လည်း၎င်းတို့သည် (Lo & Wei၊ 2005 ; ပတေရု & Valkenburg, 2006 ) သူတို့၏စားသုံးမှုသူတို့သည်မိန်းမလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ရှိမရှိနှင့်အတူပဲ့တင်ထပ်နေကတညျး။ အင်တာနက်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်များကိုသော့အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဤသည်ကိုလည်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဆန့်ကျင်ချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာဗွီဒီယိုသို့မဟုတ် DVD ကိုအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ထိတွေ့မှုမဟုတ်ခဲ့သော်လည်း, အင်တာနက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်သာထိတွေ့မှုသိသိသာသာ, လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများအယူအဆတွေနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များတွင်ပြသသည်။ အင်တာနက်ကိုတစ်ဦးယေဘုယျအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကသာတစိတ်တပိုင်းသူ့ဟာသူဖြစ်သော်လည်းကြောင့်အကြီးအကျယ်ယင်း၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဤပတ်ဝန်းကျင်သတ်မှတ်ပုံရသည်။ မြီးကောင်ပေါက် '' မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်သာမြီးကောင်ပေါက်ကွဲပြားခြားနားသောမီဒီယာ၌တူညီသောလိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာပိုရဟုမဆိုလိုပါ; ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကပိုလိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာအရသည်ဟုဆိုလိုသည်, ဤအင်တာနက်ပေါ်တွင်အများစုတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒါကြောင့်အထူးသအင်တာနက်ပေါ်နှင့်အသံ-အမြင်အာရုံ format နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှု, အနာဂတ်သုတေသနတွင်ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုခံယူကြောင်းထိပ်တန်းပုံရသည်။
အစောပိုင်းကအများအပြားလေ့လာမှုများအတွက်မတူဘဲ, ငါတို့ရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ်မဂ္ဂဇင်းများအပေါ်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်အမျိုးသမီးများလိင်အရာဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းသူတို့၏ယုံကြည်ချက်များအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့မတှေ့ခဲ့ပေ။ လိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်အယူအဆတွေမှထိတွေ့မှုများအကြားအဆိုပါ hierarchical စပ်လျဉ်းသာမဂ္ဂဇင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင် Semi-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှုနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အတိုင်းအတာများနှစျခုနှင့်ဤတွေ့ရှိချက်များ၏တဦးတည်းအယူအဆရေးရာရှင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ကြသည်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောရုပ်မြင်သံကြားအမျိုးအစားများအတွက်မြီးကောင်ပေါက် '' အကျိုးစီးပွား proxy ကို variable ကိုအတူရုပ်မြင်သံကြားပေါ် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာ sexually ထိတွေ့ operationalized ။ အခြားအထိတွေ့မှုအစီအမံများနှင့်အတူဆက်စပ်မှုတစ်စုံတစ်ရာသံသယရှိပုံစံများအကြံပြုမပြုခဲ့သော်လည်း, လိင် Non-ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏တစ်ဦးထက်ပိုသောခိုင်လုံသောမည့်ကွဲပြားခြားနားသောတွေ့ရှိချက်များကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ဒုတိယအချက်မှာကရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာလိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုဖြစ်နိုင်သည်ကိုပိုပြီးတိတိကျကျကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု၌ပြစ်မှားမိခဲ့သည်ထက်တိုင်းတာရမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ယခင်လေ့လာမှုများ, ပုံမှန်အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ (ဥပမာ, ဆပ်ပြာ, ဂီတရှိုးများ, နှင့်ရုပ်ရှင်) တို့ပါဝင်သည်ကြောင်းအမျိုးအစားများနှင့်အညီ, ရွေးယူကြ၏။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ရုပ်မြင်သံကြားအပေါ်လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာမှထိတွေ့မှုဖြစ်နိုင်သည်တိကျတဲ့ဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ယောက်ျားအဖြစ်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထားတဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ဥပမာ gangsta rap ဂီတဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းဂီတဗီဒီယိုများတိကျတဲ့အမျိုးအစားများမှထိတွေ့မှုနှင့်အတူဖမ်းမိရန်လိုအပ်ပါသည် "pimps" နှင့်အမျိုးသမီးများ) "ခွေးမ" အဖြစ်ကုသနေကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များ၏တစ်ဦးကတတိယ, ပိုမိုအယူအဆရေးရာရှင်းပြချက်မြီးကောင်ပေါက်အကြား desensitization ဖြစ်စဉ်များကိုရည်ညွှန်းပေမည်။ မြီးကောင်ပေါက်မှလက်ရှိရရှိနိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအတွက်အကဲဆတ်သောများ၏ဒီဂရီပေးသောပိုမိုရိုးရာ, လိင် Non-အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာသူတို့ခဲအကြောင်းအရာများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျသတိထားမိကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်အဘို့ဤမျှလောက်ပုံမှန်ဖြစ်လာကြပေမည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်အချို့သောအဆင့်အထိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထဲမှာဖော်ပြပါတယ်တဲ့အခါမှသာဒီအကြောင်းအရာထိတွေ့မှု၏ဖုံးကွယ်အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification အတွက်ဥပမာ, ပြသနိုင်ဖို့ကိုစတင်ကြဘူး။ Zillmann နှင့် Bryant ( 1986 , 1988 ) ထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းထိတွေ့ယောက်ျားများအတွက်ထိုကဲ့သို့သော desensitization ဆိုးကျိုးများဖော်ပြထားသော်လည်း, သူတို့သည်လည်းခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့မြီးကောင်ပေါက်အဘို့စိတ်ကူးရှိပါတယ်ပါပြီ။ ဤသည်, တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကို (ပေတရု၏အယူအဆမှ context-sensitive ၏အတိုင်းအတာဖြည့်စွက် 2004 ) ။ အလားတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်မှအညီအမျှဆက်စပ်မဖြစ်မည်အကြောင်း, အသင်း၏ခွန်အားအစားအပေါ်မူတည်ပေမည် အကျယ်အဝန်း သောမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏အတိုင်းအတာပေါ် မူတည်. ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နိုင်ပါသည်။ သုတေသနအများစုအမေရိကန်အခြေစိုက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုနယ်သာလန်၌ပြစ်မှားမိခဲ့ပေးထား Cross-အမျိုးသားရေးနှိုင်းယှဉ်သုတေသီများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအကြောင်းအရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်မှထိတွေ့မှုများအကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏အခြေအနေတွင် sensitivity ကိုစမ်းသပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်တခုကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏အတော်လေးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းမီဒီယာပုံဖော်တင်ဆက်လိင်တ္ထု (ရပ်ကွက်, အဖြစ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆယ်ကျော်သက် '' အယူအဆတွေနဲ့အတူနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသကြောင်းသုတေသနတစ်ခုအသေးပေမယ့်ဆိုနိုင်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအထောက်အကူပြုရန် 2002 ; ရပ်ကွက်နှင့်ဖရီဒ်မန်း 2006 ) ။ အလွန်အထူးအင်တာနက်ပေါ်နှင့်အသံ-အမြင်အာရုံ format နဲ့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဆယ်ကျော်သက် '' ထိတွေ့မှု၏အရေးပါမှုကိုထောက်ပြသည်သောသို့သော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုယခင်သုတေသနကိုတိုးချဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်သုတေသနပြုနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော strands နှင့်အညီ၌ရှိကြ၏။ ပထမဦးစွာလိင် objects အဖြစ်ကျနော်တို့အမျိုးသမီးတွေအယူအဆတွေနဲ့အတူ related ခံရဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ On-line ကိုရုပ်ရှင်တွေကိုတွေ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုအမျိုးသမီးတွေဥပမာ Brosius et al (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအတွက် objectified ဖြစ်ကြောင်းသရုပ်ပြပြီအကြောင်းအရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်အတူ concurs ။ , 1993 ; Cowan et al ။ , 1988 ; Ertel, 1990 ) ။ ဤသည် objectification တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Cowan et al (အမြိုးသမီးမြားအကြောင်းကိုယောက်ျားရဲ့ထောင်ချီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ချက်များကနေဖြစ်စေနိုင်တယ်။ , 1988 ; Ertel, 1990 ) ။ ဒုတိယအချက်မှာဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ဒီဗီဒီတွင်ဤကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းထက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများဖြစ်သည်ဟူသောယုံကြည်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟူသောအချက်သည်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုငြင်းခုံခဲ့ကြသည့်သုတေသီများအားအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းတွင်အင်တာနက်သည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည် (Donnerstein & Smith, 2001 ; Greenfield, 2004 ; Thornburgh & Lin၊ 2002 ).
ပုဒ်မ -၄ ပါပုံစံနှင့်အတူယခုလေ့လာမှုသည်လိင်မှုကိစ္စမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆိုင်ရာအရာများဖြစ်သည်ဟူသောယုံကြည်ချက်များအကြားရှင်းလင်းပြတ်သားသောကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမ်းကြောင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ လိင်မှုကိစ္စမီဒီယာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကမြီးကောင်ပေါက်များ၏ယုံကြည်ချက်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သောမြီးကောင်ပေါက်များသည်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအားအထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်ခံရသည်ဟုခံစားရပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်မကြာခဏဤအကြောင်းအရာသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤပဟေpိသည်အရွယ်အစားသေးငယ်သူများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများအတွက်လေ့လာမှုများတွင်စမ်းသပ်မှု၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများကြောင့် longitudinal design များဖြင့်သာဖြေရှင်းနိုင်သည်။ လိင်မှုကိစ္စပြုထားသောမီဒီယာပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆိုင်ရာအရာများသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ယုံကြည်ချက်များအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းတို့နှစ်ခုအကြားပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည်လူမှုရေးနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ အနောက်နိုင်ငံများစွာတွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှု၊ အပြန်အလှန်နားလည်မှုနှင့်လေးစားမှုတို့ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုရရှိရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ တူညီသောအချက်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဆအဆင့်အတန်း၊ ကျား၊ မရေးရာပုံစံများနှင့်အမျိုးသမီးများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှုစသည့်ပြissuesနာများသည်လူထုဟောပြောချက်သို့ရောက်သွားသည်။ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအကြား - လိင်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများအဖြစ်အမျိုးသမီးများ၏အယူအဆများသည်အထူးသဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပါကကျား၊ မနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်သက်ဆိုင်သောပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်တင်ပြသောအယူအဆများနှင့်ရလဒ်များသည်ဤပြissueနာကိုနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပထမဆုံးခေါ်ယူခြင်းကိုတင်ပြနိုင်သည်။
စာရေးသူဤဆောင်းပါး၏တစ်ဦးအစောပိုင်းကမူကြမ်းအပေါ်သူတို့ရဲ့အမြင်မှတ်ချက်များနှစ်ခုအမည်မသိသုံးသပ်ရေးကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယစာရေးဆရာနှစ်ဦးစလုံးမှသိပ္ပံသုတေသနများအတွက်နယ်သာလန်အဖွဲ့အစည်း (NWO) မှထောက်ပံ့ငွေများကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
Aiken, LS, & အနောက်, စင်ကာပူဒေါ်လာ (1991) ။ အကွိမျမြားစှာဆုတ်ယုတ်: interaction ကစုံစမ်းပြန်ဆို။ Newbury ပန်းခြံ,, CA: Sage ။
Aubrey, JS, Harrison, K. , Kramer, အယ်လ်, & Yellin, ဂျေ (2003) ။ အမျိုးမျိုးနှင့်အချိန်ကိုက်ခြင်း - လိင်ကျောင်းသားများအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ထားသည့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏လိင်ကွဲပြားမှုမျှော်မှန်းချက်တွင်ကျား၊ မကွဲပြားမှုများ။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 30, 432-460 ။CrossRef
Brosius, HB ။ , Weaver, JB, & Staab, JF (1993) ။ မျက်မှောက်ခေတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏လူမှုရေးနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်များကိုစူးစမ်းခြင်း။ လိင်သုတေသန 30 ၏ဂျာနယ်, 161-170 ။
ဘရောင်း, JD (2000) ။ မြီးကောင်ပေါက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအစားအစာ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး, 27S ၏ဂျာနယ်, 35-40 ။CrossRef
ဘရောင်း, JD, L'Engle, KL, Pardun, CJ, Guo, G. အ, Kenneavy, K. , & Jackson က, C. (2006) ။ Sexy media ကိစ္စ - ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်မဂ္ဂဇင်းများတွင်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်အပြုအမူကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ ကလေးအထူးကု, 117, 1018-1027 ။PubMedCrossRef
လက်သမား, LM (1998) ။ အတွင်းလိင်နှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများအတွက် Scripts: အမျိုးသမီးတွေသို့မိန်းကလေးငယ်ထံမှ ဆယ့်ခုနှစ် မဂ္ဂဇင်း, 1974-1994 ။ လိင်သုတေသန 35 ၏ဂျာနယ်, 158-168 ။
Cooper က, အေ (1998) ။ လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ Cyberpsychology & အပြုအမူ၊, 181-187 ။CrossRef
Cowan, G. အ, Lee က, C တို့, Levy, D. , & Snyder, D. (1988) ။ X-rated ဗီဒီယိုခွေများတွင်ကြီးစိုးမှုနှင့်မညီမျှမှု။ အမျိုးသမီးများလပတ်, 12 ၏စိတ်ပညာ, 299-311 ။CrossRef
Donnerstein, အီး, & စမစ်, အက်စ် (2001) ။ မီဒီယာရှိလိင် - သီအိုရီ၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဖြေရှင်းချက်များ။ DG Singer & JL Singer (Eds ။ ) တွင်၊ ကလေးများနှင့်မီဒီယာများ၏လက်စွဲစာအုပ် (စစ။ 289-307) ။ တထောင်သပိတ်, CA: Sage ။
Drenth, JJ, & Slob, AK (1997) ။ နယ်သာလန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒတ်ခ်ျအန်တီလန်။ RT ကို Francoeur (Ed က။ ) ၌, လိင်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစွယ်စုံကျမ်း (Vol ။ 2, စစ။ 895-961) ။ နယူးယောက်: စဉ်ဆက်။
Ertel, အိပ်ချ် (1990) ။ Erotika und ညစ်ညမ်း: Repräsentative Befragung und psychophysiologische Langzeitstudie zu Konsum und Wirkung [Erotica နှင့်ညစ်ညမ်း။ ကိုယ်စားလှယ်စစ်တမ်းနှင့်စားသုံးမှုနှင့်ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများ] အပေါ်စိတ်ပညာဇီဝကမ္မ longitudinal လေ့လာမှု။ မြူးနစ်, ဂျာမနီ: PVU ။
Escobar-Chaves, SL, Tortolero, SR, Markham, CM, Low, BJ, Eitel, P. , & Thickstun, P. (2005) ။ ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှု။ ကလေးအထူးကု, 116, 303-326 ။PubMedCrossRef
Fredrickson, BL, & Roberts သည်, TA ။ (1997) ။ သတ်မှတ်ချက်သီအိုရီ - အမျိုးသမီးများနေထိုင်ခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကိုနားလည်ရန်။ အမျိုးသမီးများလပတ်, 21 ၏စိတ်ပညာ, 173-206 ။CrossRef
Freeman က-Longo, RE (2000) ။ သားသမီးတို့, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive, 7, 75-90 ။
Glick, P. , Lameiras, အမ်, & ကက်စထရို, YR (2002) ။ ပညာရေးနှင့်ကက်သလစ်ဘာသာတရားသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ရန်လိုသော၊ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 47, 433-441 ။CrossRef
Grauerholz, အီး, & ဘုရင်ကအေ (1997) ။ Prime အချိန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်။ အမြိုးသမီးမြား,3အကြမ်းဖက်မှု, 129-148 ။PubMed
Greenberg, BS, Siemicki, M. , Heeter, C, Stanley, C, Soderman, အေ, & Linsangan, R. (1993) ။ ဆယ်ကျော်သက်များကကြည့်ရှုအားပေး R-rated ရုပ်ရှင်များတွင်လိင်အကြောင်းအရာ။ BS Greenberg, JD Brown၊ & N. Buerkel-Rothfuss (Eds ။ ) တွင် မီဒီယာ, လိင်, နှင့်ဆယ်ကျော်သက် (စစ။ 45-58) ။ Cresskill, NJ: Hampton ။
Greenfield, ညနေ (2004) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းမှအမှတ်တမဲ့ထိတွေ့: ကလေးသူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မိသားစုများအတွက် peer-to-peer file-sharing ကွန်ရက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အသုံးချ Developmental စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 25, 741-750 ။CrossRef
Krassas, NR, Blauwkamp, ​​JM, & Wesselink, P. (2001) ။ လက်ဝှေ့ဟယ်လီနာနှင့်ယူနီနပ်ကိုတွန်းလှန်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောအဆို နာမည်ကျော် နှင့် Playboy မဂ္ဂဇင်းများ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 44, 751-771 ။CrossRef
Kunkel, D. , Eyal, K. , Finnerty, K. , Biely, အီး, & Donnerstein, အီး (2005) ။ တီဗီ4အပေါ်လိင်။ Menlo Park, CA: ခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက။
Lanis, K. , & Covell, K. (1995) ။ ကြော်ငြာတွင်ပါသောအမျိုးသမီးများ၏ပုံများ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားအပေါ်သက်ရောက်မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 32, 639-649 ။CrossRef
Le Gall, အေ, Mullet, အီး, & Shafighi, SR (2002) ။ အသက်အရွယ်၊ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများ။ လိင်သုတေသန 39 ၏ဂျာနယ်, 207-216 ။PubMed
L'Engle, KL, Brown, JD, & Kenneavy, K. (2006) ။ မီဒီယာသည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်အရေးကြီးသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး, 38 ၏ဂျာနယ်, 186-192 ။PubMedCrossRef
Lerner, RM, & Castellino, DR (2002) ။ ခေတ်ပြိုင်ဖွံ့ဖြိုးမှုသီအိုရီနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်: ဖွံ့ဖြိုးမှုစနစ်များနှင့်အသုံးချဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး, 31 ၏ဂျာနယ်, 122-135 ။PubMedCrossRef
Lo, Vh ။ , & ဝေ, R. (2005) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာဂျာနယ်၊ ၄၉, 221-237 ။CrossRef
MacKay, NJ, & Covell, K. (1997) ။ အမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထားအပေါ်ကြော်ငြာများတွင်အမျိုးသမီးများ၏သက်ရောက်မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 36, 573-583 ။CrossRef
Miller ကဘီစီ Christopherson, CR, & King, PK (1993) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လိင်အပြုအမူ။ TP Gullotta, GR Adams, & R. Montemayor (Eds ။ ) တွင် ဆယ်ကျော်သက်လိင် (စစ။ 57-76) ။ Newbury ပန်းခြံ,, CA: Sage ။
Mitchell က KJ, Finkelhor, D. , & Wolak, J. (2003) ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လူငယ်များမလိုလားအပ်သောလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း။ အန္တရာယ်၊ သက်ရောက်မှုနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားစစ်တမ်း။ လူငယ်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း, 34, 330-358 ။CrossRef
Mustanski, BS (2001) ။ ကြိုးတဲ့: လိင်ခိုင်လုံသောအချက်အလက်များ၏စုဆောင်းခြင်းများအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးချခြင်း။ လိင်သုတေသန 38 ၏ဂျာနယ်, 292-301 ။
Pardun, CJ, L'Engle, KL, & Brown, JD (2005) ။ ရလဒ်များနှင့်ထိတွေ့မှုကိုချိတ်ဆက်ခြင်း - မီဒီယာခြောက်ခုတွင်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကိုသုံးစွဲမှု။ Mass ဆက်သွယ်ရေး & လူ့အဖွဲ့အစည်း, 8, 75-91 ။CrossRef
ပေါလုက, P. (2005) ။ Pornified: ဘယ်လိုညစ်ညမ်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး, ငါတို့မိသားစုတွေကိုပြောင်းလဲနေသည်။ နယူးယောက်: Times က။
ပေတရုသည်ဂျေ (2004) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာရှည် '' အစွမ်းထက်ဒြပ်ထုမီဒီယာ၏အယူအဆမှပြန်လာ ': ဗညျြးမီဒီယာလွှမ်းခြုံ၏သက်ရောက်မှု၏တစ်ဦးက Cross-အမျိုးသားရေးနှိုင်းယှဉ်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ပြည်သူ့ထင်မြင်ချက်သုတေသနအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 16, 144-168 ။CrossRef
ပတေရုသ, ဂျေ, & Valkenburg, pm တွင် (2006) ။ ဆယ်ကျော်သက်များအင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့ခြင်း ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 33, 178-204 ။CrossRef
Petersen, AC, Crockett, အယ်လ်, Richards, အမ်, & Boxer, အေ (1988) ။ အပျိုဖော်ဝင်အခြေအနေအဆင့်အတန်း - မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံခြင်း - ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်ကန ဦး စံနှုန်းများ။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 17, 117-133 ။CrossRef
Qrius (2005) ။ Jongeren 2005 ။ Het [လူငယ် 2005 verandert speelveld ။ အဆိုပါကစားမြေပြင်] ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အမ်စတာဒမ်: Qrius ။
Rich, အမ်, & Bar-On, အမ် (2001) ။ သတင်းအချက်အလက်ခေတ်ရှိကလေးကျန်းမာရေး - ကလေးအထူးကုများ၏မီဒီယာပညာရေး။ ကလေးအထူးကု, 107, 156-162 ။PubMedCrossRef
Roberts သည် DF, Foehr, UG, & Rideout, V. (2005) ။ Generation M: အသက် ၈ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အတွင်းရှိမီဒီယာများ။ Menlo Park, CA: ခိုင်ဆာမိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းက။
Rutgers Nisso အဖွဲ့ (2005) ။ je 25e onder Seks [25 မတိုင်မီလိင်]။ ရယူရန်သြဂုတ်လ 29, 2005 မှ http://www.seksonderje25e.nl/resultaten.
Scott, je (1986) ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်စောင်ရေမဂ္ဂဇင်းအတွက်လိင်ကိုးကားထားတဲ့ updated longitudinal အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ လိင်သုတေသန 22 ၏ဂျာနယ်, 385-392 ။
Seidman, SA (1992) ။ သီချင်းဗီဒီယိုများအတွက်လိင်-အခန်းကဏ္ဍကျပုံစံတစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာဂျာနယ်၊ ၄၉, 209-216 ။
Strasburger, VC, & Donnerstein, အီး (1999) ။ ကလေးများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မီဒီယာ - ပြIssနာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ။ ကလေးအထူးကု, 103, 129-139 ။PubMedCrossRef
Strouse, JS, & Buerkel-Rothfuss, N. (1995) ။ ကျားမနှင့်မိသားစုသည်တေးဂီတဗီဒီယိုထိတွေ့မှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်အကြားဆက်နွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်, 30, 505-521 ။PubMed
Strouse, JS, Goodwin, MP, & Roscoe, B. (1994) ။ အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသဘောထားဆက်စပ်မှု။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 31, 559-577 ။CrossRef
Thornburgh,,, & Lin, HS (2002) ။ လူငယ်, ညစ်ညမ်း, နှင့်အင်တာနက်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမျိုးသားအကယ်ဒမီ။
Townsend, JM (1993) ။ လိင်နှင့်မိတ်ဖက်ရွေးချယ်ရေး: ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Ethology နှင့် Sociobiology, 14, 305-329 ။CrossRef
ယူနီဆက် (2001) ။ ကြွယ်ဝသောနိုင်ငံများ၌ပင်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးမွေးဖွားတဲ့လိဂ်စားပွဲပေါ်မှာ (Innocenti အစီရင်ခံစာကဒ်မပါ။ 3, ဇူလိုင်လ 2001)။ ရယူရန်သြဂုတ်လ 30, 2005 မှ http://www.unicef-icdc.org/publications/pdf/repcard3e.pdf.
ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (2001) ။ လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအစီရင်ခံစာ 2001။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
Valkenburg, pm တွင်, & Janssen, SC (1999) ။ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွင်ကလေးများသည်အဘယ်အရာကိုတန်ဖိုးထားသနည်း။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ ဆက်သွယ်ရေး, 49 ၏ဂျာနယ်, 3-21 ။CrossRef
Valkenburg, pm တွင်, & ပေတရု, ဂျေ (2007) ။ Preadolescents 'နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်သူတို့ရင်းနှီးမှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ (စာနယ်ဇင်းအတွက်)
ရပ်ကွက်, LM (2002) ။ ရုပ်မြင်သံကြားထိတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. ထွန်းသစ်စလူကြီးများ '' သဘောထားများနှင့်ယူဆချက်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား? ဆက်စပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်အတည်ပြုချက်။ လူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, 31, 1-15 ။CrossRef
ရပ်ကွက်, LM (2003) ။ ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: အမေရိကန်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးအတွက်ဖျော်ဖြေရေးမီဒီယာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ခြင်း။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 23, 347-388 ။CrossRef
ရပ်ကွက်, LM, & Friedman, K. (2006) ။ တီဗွီကိုလမ်းပြအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း - ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအကြားဆက်နွယ်မှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်, 16 အပေါ်သုတေသနဂျာနယ်, 133-156 ။CrossRef
ရပ်ကွက်, LM, & Rivadeneyra, R. (1999) ။ ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များသို့ဖျော်ဖြေရေးရုပ်မြင်သံကြား၏ပံ့ပိုးမှုများ - ကြည့်ရှုသူ၏ပါဝင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ကြည့်ရှုခြင်းပမာဏ၏အခန်းကဏ္။ ။ လိင်သုတေသန 36 ၏ဂျာနယ်, 237-249 ။CrossRef
Zillmann,,, & Bryant, ဂျေ (1986) ။ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုနှစ်သက်ခြင်း။ ဆက်သွယ်ရေးသုတေသန 13, 560-578 ။
Zillmann,,, & Bryant, ဂျေ (1988) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြာရှည်စွာသုံးစွဲခြင်းကြောင့်မိသားစုတန်ဖိုးများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ မိသားစုကိစ္စများ,9၏ဂျာနယ်, 518-544 ။
New National Survey တွင် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသည် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး စိတ်ကျေနပ်မှုကို လျော့ကျစေကြောင်း တွေ့ရှိသည် "စုံတွဲအားလုံး၏ 20% သည် အချို့သော ညစ်ညမ်းမှုအချို့ကို ဖော်ပြသည်... t.co/yAQsr7P5UY